Johane Chitsauko 02. Sungano yakaitwa naMwari kuna Abrahama yakazadziswa munaKristu yaive yei?
» Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Johane Chitsauko 02. Sungano yakaitwa naMwari kuna Abrahama yakazadziswa munaKristu yaive yei?
Johane Chitsauko 02. Sungano yakaitwa naMwari kuna Abrahama yakazadziswa munaKristu yaive yei?
Johane Chitsauko 2
Jesu ari Mari paMuviri, anotarisa pazviitiko zvehupenyu hwevanhu serudzi kana mimvuri kana micherechedzo yechokwadi chemweya chakadzama kwazvo. Saka Evangeri raJohane rinotigonesa kuona kuti Mwari anoona sei zviitiko zvedu zviduku zvenyika ino muzvirevo zveMuono wake Mukuru waanogona kuona iye oga.
“Garirea” rinogona kushandurwa kubva pazwi rinoreva “denderedzwa”.
Kunyora denderedzwa kunotendera kuti chinyoreso chako chifambe nzvimbo imwe kanodarika kamwechete. Saka zviitiko zvenyika muTestamente Yekare zvinokwanisa kumiririra hunhu hwehushumiri hwaKristu uye hwekereke yake yaizouya.
Semuenzaniso, hunhu hwemunhukadzi hunomiririra chimiro chekereke pamweya. Sezvo mukadzi ari mucherechedzo wekereke. Kristu anoona kereke yake semwenga wake.
Mwenga waAdamu ainzi mukadzi (nekuti aive atorwa pamurume) kusvikira paakawira muchivi akaita mai vavose vanorarama. Akabva aita zita rakaakapiwa nemunhu rekuti Eva.
Izvi zvinomiririrei muMuono Mukuru waMwari?
Vatendi mukereke yekutanga yeTestamente Itsva vaidaidzwa kuti vaKristu, nekuti
vaive vaKristu neShoko rake chete. Bhaibheri ndiro Shoko. Zvino muna 325 AD mambo Constantine vakapa simba rezvematongerwo enyika kukereke yeRoman Catholic. Zita rakaitwa nevanhu “Roman Catholic”rairatidza kuti vaive vawira pasi kure neMagwaro.
Kereke yemasangano iyi yakasimuka pamasimba nekutonga payakabatanidza kunyengera muzvitendero, zvematongerwo enyika uye hupfumi hukuru kwazvo kusvikira yazvidaidza kuti mai vemakereke sezvo yakazobereka masangano emakereke anoipikisa nemamwe akafanana nayo. VeRoman Catholic vanoisa munhu kuti atungamirire kereke. Vakazivisa mashoko nemazano asimo muBhaibheri. Masangano hazvisi muMagwaro. Zvimwechete neTiriniti. Ndizvozvo neKisimusi nemuti weKisimusi. Zvimwechete naachibhishopu, kadhinari naPopu. Vatendi veTestamente Itsva vekutanga havana kubvira vaita mufundisi anotungamirira kereke. Izwi rekuti mufudzi (mufundisi) rakanyorwa kamwechete chete muTestamente Itsva, kunyangwe zvakadaro rakatukwa katanhatu muTestamente Yekare. Testamente Itsva haina kubvira yataura kuti mufudzi (shepadhi) ndiye mufudzi (Mufundisi, pasita) uku kuita kwevanhu chete.
Saka, kutora zita rakaitwa nevanhu rakaita serekuti Methodist, Baptist, Anglican,Greek Orthodox, nemamwe akadaro makereke aingoratidza kuti vaive vawira muzvivi uye kusatenda nekuti vanotenda mumazwi asimo muMagwaro uye mazano asimo muBhaibheri.
ZVAKAZARURWA 17:5 Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita rakavanzika iri: BABHIRONI, GUTA GURU, MAI VEMHOMBWE NAVEZVINONYANGADZA ZVENYIKA.
Mhombwe mukadzi asina kutendeka kumurume wake. Uyu mucherechedzo wekereke isingateveri Bhaibheri nemazvo. Jesu, Shoko raMwari ndiye murume wekereke. Ndiye Bhaibheri. Sekunyorwa kwarakaitwa. Tiri vake sevaKristu uye tinofanira kugara takavimbika kwaari. VeRoman Catholic vanozviti mai vemakereke.
Kereke yeCatholic yakatanga bhizimisi rekuzvitsvagira mari ichibva muzvitendero. Kuti zvive nechiremerera, vakaita makereke anotongwa nevaprista kana nevafundisi. Vakabuda muBhaibheri vakazivisa dzidziso yeTiriniti. Saka havana zita rimwechete raMwari wavo sezvo ari Vanhu vatatu vakasiyana. Kuzvisanganisa mune zvematongerwo enyika kwakavaita kuti vave nembiri. Iyi ingori mifananidzo yezvimwe zvinotendwa nekereke yeCatholic nenzira dzekereke yeRoman Catholic dzinotevedzerwa nemamwe makereke, zvichivaita vanasikana makereke anoita hunhu hwaamai vavo Roma. Roma ine maonerwo epamusoro-soro sekereke yepasi rese, yakapfuma, yakakosha munezvematongerwo enyika uye inokundi sezvo yararama kwemakore anosvika 19oo. Saka bhizimisi rayo nenzira dzayo dzekutsvaga mari zvakaisa mufananidzo uri kutevedzerwa nemamwe makereke, kunyangwe paine musiyano mudzidziso dzavo. Bhizimisi rinosimbiswa nemazita seCoke, Apple, Google, nike. Roma yakaita Petro Mutsvene mubati wesuwo redenga, Maria saamai vane tsitsi vamunokwanisa kunamata kwavari nevamwe vatsvene. Pope John Paul II, amai Theresa, naPope Francis vakabva vatanga kuremekedzwa pasi rese akava mazita ane mbiri mukereke yeRoman Catholic. Hupfumi hwemaCatholic hukabatanidzwa hwese hukuru kwazvo. Vamwe vemakereke vasiri maCatholic vari kusimudzirawo mazita avo ezvitendero akaita seekuti TD Jakes, Joseph Prince, Orprah Winfrey, naJoel Osteen. Saamai, ndizvo zviri vanasikana. Mazita aya anokosha mabhiriyoni emadhora.
EZEKIERI 16:44 "Tarira, mumwe nomumwe anobata netsumo, achabata tsumo iyi pamusoro pako, achiti, `Sezvakaita mai, ndizvo zvakaita mwanasikana wavo.'
Nekuziva kuti kereke icharasika kubva paBhaibheri, Jesu akatanga hushumiri hwake nekuisa zvinhu zvikuru zvaidiwa zvinofanira kuteverwa nekereke kuti isarasiswe nemazano evanhu akangwara nerudo rwemabhizimisi runoitisa mari kwazvo.
Kuna Zvakazarurwa Chitsauko 1 Jesu akazvidaidza kuti Arfa neOmega, wekutanga neweKupedzisira.
Munana wekutanga wakaitwa naJesu waive wekushandura mvura kuita waini pamuchato wepaKana.
Munana wekupedzisira uchaitwa naJesu unobata kereke yechokwadi uchava kushandurwa kwemiviri inowora yekereke yake inorarama kuva miviri yakafuka kusavora kuti igotorwa ikwire kuDenga kuti iende kumutambo wemuchato kuDenga.
JOHANE 2:1 Nezuva retatu mutambo wokuwana waivapo paKana yeGarirea; namai vaJesu vakanga varipo
Kana inotorwa dzimwe nguva kureva kuti “nzvimbo yetsanga” sezvo padyo paive nenzvimbo yaikura tsanga dzakawanda.
ZVAKAZARURWA 11:1 Zvino ndakapiwa rutsanga rwakaita somudonzvo; mutumwa akati: Simuka, uyere tembere yaMwari, nearitari, navanonamata mairi.
2 Asi siya ruvazhe ruri kunze kwetembere, usaruyera; nokuti rwakapiwa vahedheni; vachatsika guta dzvene mwedzi inamakumi mana nemiviri.
Tsanga inotaura pamusoro pemuyero.
Pano muyero wehurebu hauna kutaurwa asi kukosha kwakaiswa pamuyero wenguva yemakore matatu nehafu. Tsanga inova mucherechedzo wemuyero apa inoratidza kuti Mwari akayera nguva yakasarudzika kumaJuda.
Chii chinomiririrwa nekusayera ruvazhe rwekunze rwevaHedheni?
Hatizivi nguva yakapuhwa maHedeni? Hatizivi kuti Mwari achauya rini kuzogumisa nguva yekereke yeRaodikia.
VaKristu vazhinji vakafungidzira 1844, 1914, 1975, 2013 asi vaive vachirasika panguva idzi dzese. Vatendi veMharidzo vakafungidzira 1970, 1977 na 2000 zvakare vakarasikawo panguva dzese idzi. Kudanana hakusi kuroorana. MaKristu akazadzwa nerudo rwekutsvaga mazuva ezviitiko pachokwadi havana kuroorana naJesu.
Guta dzvene nderemaJuda. “Dzvene” zvinoreva kuti Mwari ari kuvabatsira (nekuti Mwari ega ndiye Mutsvene) panenge pachioma zvinhu kwemakore matatu nehafu munguva yeKutambudzika kukuru.
Saka kana kereke ikakwira kuDenga kumuchato neGwaiana, ndipo panotanga makore matatu nehafu enguva yeKutambudzika kukuru kumaJuda (nevose vemaHedheni vanenge vasara).
ZVAKAZARURWA 11:3 Ndichapa zvapupu zvangu zviviri simba kuti zviporofite, zvakapfeka masaga, mazuva anechuru chinamazana maviri namakumi matanhatu.
Zvapupu ndiwo maprofita emaJuda Mosesi naEria. Kuti Zviprofita zviviri izvi zviitike nguva yakareba zvakafanana, zvakaprofitwa muBhaibheri zvinofanira kushanda mumwedzi wemazuva makumi matatu.
Fananidzai izvi nemazuva emvura yaNoa.
GENESISI 7:24 Mvura ikaramba yakakwirira pa­nyika mazuva ane zana namakumi ma­shanu.
GENESISI 7:11 Pagore ramazana matanhatu rou­penyu hwaNoa, nomwedzi wechipiri, nezuva regumi namanomwe romwedzi, nezuva iroro matsime ose apakadzika­dzika akadziurwa, namahwindo edenga akazarurwa;
GENESIS 8:4 Nomwedzi wechino­mwe, nezuva regumi namanomwe ro­mwedzi, areka ikamira pamusoro pama­komo eArarati.
Kubva musi wa 17 wemedzi wechipiri kusvika musi wa 17 wemwedzi wechinomwe pane mwedzi mishanu. Zvakaenzana nemazuva 150. zvakare mazuva makumi matatu anoburitsa mwedze umwechete wechiprofita.
Saka “Kana” zvinomiririra mupimo ne”tsanga”, inoshandiswa kupima hurefu hwenguva yechiprofita chakakosha chakaitwa maererano nehushumiri hwaMessiasi.
Jesu aifanira kuita hushumiri hwemakore manomwe nemaJuda.
Mazuva ekutanga ehushumiri hwake, Jesu akadaidzwa kumuchato paKana. Saka chiringazuva chakabva chatanga kufamba nhorondo dzikanyorwa pasi zvekuti mumakore matatu nehafu Jesu aizoroverwa paCalvari. Saka, nekuti akarambwa nemaJuda, vanoshanda sechiringazuva chaMwari chekumisa kana kutanga kufambisa nguva, nguva dzechiprofita dzakamira kumaJuda paCalvari. Saka maJuda akagamuchira hafu yenguva yavaive vakavimbiswa.
Kereke painotorwa kukwira kuchirairo chemuchato neGwaiana, chiringazuva chinotanga kufamba nguva dzechiprofita dzoenderera mberi apo Mwari anodzokera kumaJuda kunopedzisa makore matatu nehafu enguva yeKutambudzika kukuru (dzinobva dzawedzerwa pamakore matatu nehafu ehushumiri hwaJesu).
Izvi zvinotsanangura chiprofita chakakosha chisinganzwisiswi nemakereke nhasi uno.
DANIERI 9:27 Zvino iye achaita sungano yakasimba navazhinji vhiki imwe; pakati pevhiki achagumisa chibayiro nechipo,
Jesu aifanira kuita hushumiri hwemakore manomwe. Hushumiri hwake hwakaita makore matatu nehafu nekuti akarambwa akauraiwa pakati nepakati pemakore manomwe. Paakafa pamuchinjikwa, Mwari akabvarura chidzitiro cheTembere. Izvi zvakabva zvagumisa Murairo wevaJuda uye zvipo zvavaipira.
Vasingadi kubvuma izvi maJuda vakasona chidzitiro vakaenderera mberi nekupira zvipo zvaive zvisisina zvazvaireva nekuti Mwari aive abuda muTembere muna 33 AD pakafa Jesu. Mwari akabva aita kuti vaRoma vaparadze Tembere muna 70 AD. Ipapo munhu wese akabva aona kuti zvzekupira zvipo zvaive zvamira.
Johane Mubapatidzi aive mutumwa weSungano. Mwari akaita sungano naAbrahama akaizadzisa muna Kristu paCalvari. Saka Johane akazivisa Jesu seMumwechete aizozadzisa Sungano.
MARAKI 3:1 "Tarirai, ndinotuma nhume yangu, iye achandigadzirira nzira yangu pamberi pangu; ipapo Ishe, wamunotsvaka, achasvika pakarepo paTembere yake, iye Mutumwa wesungano, wamunoshuva, tarirai, anouya ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo.
Vhiki rimwe rinokwanisa kushandiswa kutsanangura makore manomwe.
GENESISI 29:27 Pedzisa vhiki yewaniso naiyeyu, tigokupa mumwewo pamusoro pebasa rauchandibatira mamwe makore manomwezve."
Makereke anoti antikristu achaita sungano yemakore manomwe neIsraeri. Nhau dzenhema. Sungano inosimbiswa, saka yakaitwa rini?
Uye sungano chii, muMagwaro, iri kurehwa nechiprofita ichi?
VAGARATIA 3:17 Zvino ndinoreva chinhu ichi, ndichiti; Sungano yakasimbiswa kare naMwari, munaKristu,
Haasi antikristu anosimbisa sungano, ndiMwari anosimbisa sungano.
Saka Mwari akaita rini sungano?
Mwari akaita sungano naAbrahama kuna Genesisi chitsauko 15.
Pakutanga zvaiita sekuti sungano yaive yekupa Abrahama nyika yeChipikirwa yeIsraeri.
GENESISI 15:18 Nomusi iwoyo Jehovha akaita sungano naAb­rahama, akati, "Vana vako ndavapa nyika iyi, kubva parwizi rweIjipiti kusvikira kurwizi rukuru, runonzi Yufuratesi.
GENESISI 17:19 Mwari akati kwaari, "Kwete, asi Sara, mukadzi wako, ndiye achakubere­kera mwanakomana, unofanira kumutu­midza zita rinonzi Isaka; ndichaita su­ngano yangu naye, ive sungano isingaperi pakati pavana vake vanomutevera.
Mwari aida kuti Nyika yeChipikirwa izova yaIsaka nevana vake, maJuda.
Rwizi rweEgipita runonetsa kuronda zvakanakisa. Harusi Nairi nekuti Goshen raive pakati peNairi negwenga reSinai. Kana Nairi rwaive rwizi rweEgipita, saka maJuda pavaive muGosheni vaive vapinda kare muNyika yeChipikirwa pakauya Mosesi.
Gaza, mahombekombe ekumadokero, chikamu cheJorodani, neimwe nzvimbo huru yeSiria dzaive dzese chikamu chechipo chaMwari kuna Abrahama.
Asi sungano yaive nechirevo chakadzama kukunda izvi.
Pauro akaisa musiyano mukuru nekutaura kuti sungano yaive pamusoro paJesu, pachinzvimbo chemaJuda.
VAGARATIA 3:16 Zvino, izvo zvipikirwa zvakarebwa kunaAbrahama nokumwana wake. Haarevi, achiti: Kuvana vako, savanenge vari vazhinji; asi saanenge ari mumwe, unoti; Kumwana wako; uyu ndiye Kristu.
Asi Jesu ndiye Shoko raMwari. Saka Mwari arikuita sungano zvichibva paShoko rake.
Garerea rinounza pfungwa yedenderedzwa rinodzokororwa.
Kutenderera kamwe nemakore 2 000 enhorondo yemaJuda muNyika yeChipikirwa zvakare kutenderera zvakare nechibairo chaJesu paCalvari zvinotungamirira zvakare kune rimwe denderedzwa renhorondo yevatendi vakazvarwa patsva munguva dzemakereke dzinotorazve mamwe makore 2 000.
Pakati pemakore manomwe makore matatu nehafu. Jesu aive nehushumiri hwemakore matatu nehafu. Rufu rwake rwakagumisa kukosha kwezvibairo zvemuTembere. Ropa remhuka idzodzo raigona kuvhara zvivi nekuita kuti zviregererwe. Asi zvipo izvozvo hazvaigona kutora rudo rwekutadza.
Rufu rwake rakaburitsa Ropa rinogona kusuka zvivi nekuburitsa Mweya Mutsvene waive muropa rake kuti Mweya mutsvene udzoke kuzogara mumoyo yevanhu vakatendeuka nekubvisa rudo rwedu rwekutadza.
Saka zvibairo zveTestamente yekare zvakabva zvamira. Asi izvi zvakasimbisa sei Sungano yakaitwa naMwari kuna Abrahama?
VAGARATIA 3:29 Zvino kana muri vaKristu, muri vana vaAbhurahamu, vadyi venhaka sezvamakapikirwa.
“Chipikirwa”. MaJuda akapihwa Nyika yeChipikirwa. Chipikirwa chemaKristu ndiwo Mweya Mutsvene.
MABASA 2:38 Pauro akati kwavari: Tendevukai, mumwe nomumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
Nyika yemaKristu ndiro Shoko raMwari. MuKristu anotenda uye kurarama neShoko raMwari bedzi. Bhaibheri rinoisa miganhu pahunhu hwedu uye pamafungiro edu nenzira imwechete iyo Mwari anoisa miganhu panzvimbo yeNyika yeChipikirwa yeIsraeri.
GENESISI 15:5 Akamubudisa panze akati, "Zvino tarira kudenga, uverenge nyere­dzi, kana uchigona kudziverenga." Akati kwaari, "Ndizvo zvichaita vana vako."
Nyeredzi hadziverengeki. Dzakawandisa. Saka kuchave nemamiriyoni emaJuda munhorondo yevanhu.
Asi mutsara uyu une chirevo chakadzama kwazvo kukereke yakazvarwa patsva. Izvi zvinoreva kuti vana vaAbrahama havagoni kuverengwa nechiratidzo chechikara.Chiverengo chacho ndi 666.
Izvi zvinomborevei? Tinowana gwara kuna Johane Chitsauko 6:66.
Vadzidzi vake vazhinji vakarega kutevera Jesu.
Kuramba Shoko raMwari rakanyorwa ndiyo nhanho huru inotora vanhu pakuenda kunotora chiratidzo chechikara. Musapikisane kana kurwisa Bhaibheri. Chingotendai nekuita zvakanyorwa muShoko.
Kana tichitaura pamusoro pekutenda kwaAbrahama, Mwari akadaidza kutenda kwake kuti kururama.
GENESISI 15:6 Iye akatenda Jehovha, akamuti ndiko kururama kwake.
VAROMA 1:17 :sezvazvakanyorwa, zvichinzi: Wakarurama uchararama nokutenda.
Kutenda muna Mwari nekuva nekutenda maari ndizvo zvinodiwa naMwari kwatiri, sezvo izvi zvichiita kuti titende kuBhaibheri rakanyorwa.
VAGARATIA 3:16 Zvino, izvo zvipikirwa zvakarebwa kunaAbhurahamu nokumwana wake. Haarevi, achiti: Kuvana vako, savanenge vari vazhinji; asi saanenge ari mumwe, unoti; Kumwana wako; uyu ndiye Kristu.
Saka chirevo chakadzama pamusoro pesungano chinosanganisa Jesu Mwanakomana waAbrahama wekutenda, pachinzvimbo chaIsaka aive mwanakomana waAbrahama wekubereka.
GENESISI 15:7 Akati kwaari, "Ndini Jehovha wa­kakubudisa panyika yeUri yavaKaradhea, kuti ndikupe nyika iyi, ive nhaka yako."
Saka Mwari akadana Abrahama kuti abude munyika yevaBabironi yaive nzvimbo yenzizi dzeEufraitesi neTigirisi. VekuBabironi nevekuEgipita ndivo vaive marudzi ekwakatangira dzidziso yeTiriniti ikazopararira kumabvazuva kuIndia. Mufananidzo unotevera unoratidza maHindu achiedza kutsanangura mwari mumwechete muvanhu vatatu.
Mufananidzo uyu unoratidza vekuEgipita vachiedza kuburitsa pachena Tiriniti yevanhu vatatu.
Hazvina kunyanya kusiyana zvachose nezvinotendwa mumakereke nhasi uno.
GENESISI 15:8 Iye akati, "Ishe Jehovha, ndichaziva seiko kuti ichava nhaka yangu?"
Zvino Mwari aizoita sungano yake.
GENESISI 15:9 Akati kwaari, "Nditorere tsiru rina makore matatu, nesheche yembudzi ina makore matatu, nehondohwe rina makore matatu, nenjiva, nemwana wenjiva."
54-1212 AKAPIKA NAIYE PACHAKE
Akati, “Enda unditorere tsiru remakore matatu.” tarisai , matatu. Zvinhu zvese muBhaibheri zviri muhutatu. Zvitatu zvinozova chimwe. Mazviona? Baba, Mwanakomana, naMweya Mutsvene, kwete vaMwari vatatu. Mumwechete. Kutenda, tariro uye rudo, kwete zvinhu zvitatu zvakasiyana, asi zvese zvinhu zvechinhu chimwe: Rudo.
Zvino kwakabva kwauya kururamisirwa, nerubapatidzo rweMweya Mutsvene, kwete zviitiko zvitatu zvakasiyana, kwete mabasa matatu enyasha, asi basa rimwechete muzviratudzo zvitatu zvakasiyana. Mweya Mutsvene mumwechete waive naLuther, pasi pekururamisirwa, uye pasi paWesley nekunatswa; uye nekereke nhasi uno, murubapatidzo rweMweya Mutsvene: Mweya Mutsvene mumwechete, kwete Mweya Mitsvene miviri, Mweya Mutsvene mumwechete.
…….. chinhu chimwe nechimwe chinofanira kuva nemakore matatu ekuberekwa, mukuita kutatu kwakasiyana: hubaba, kuva mwanakomana, neMweya Mutsvene.
GENESISI 15:10 Akandomutorera izvozvo zvose, aka­zvipamura napakati, akagadzika rumwe rutivi rwakatarisana norumwe; asi shiri haana kudzipamura
Akacheka mhuka imwe neimwe napakati, zvichimiririra Testamente Yekare neTestamente Itsva.
Njiva nehangaiwa hazvina kuchekwa nepakati kana kupatsanurwa kuva zvidimbu zviviri. Zvinomiririra ruponeso nekurapwa. Izvi ndizvo zvipo zviviri kubva paCalvari zvisingagoni kuparadzanisawa. Kana uchigona kuwana ruponeso rwemweya unokwanisawo kuwana ruponeso rwemuviri.
Mwari aiita sungano naAbrahama asi aizosimbisa sungano iyi paCalvari panozadziswa sungano. Kwete Nyika yeChipikirwa yeIsraeri chete asi Hupenyu husingagumi muDenga idzva neNyika Itsva.
Vana vaAbrahama vemweya ndivo maKristu akazvarwa patsva. Chipikirwa chedu ndiwo mweya Mutsvene. Nyika yedu yatinogara ndiro Shoko raMwari rakaziviswa.
54 12 12 AKAPIKA NAIYE PACHAKE
Apa akacheka tsiru, mbudzi, akapatsanura zvinhu, akatambanudza zvidimbu zvacho, chimwe chakatarisana nechimwe, zvichiratidza kuti zvimwechete kubva pachikamu chimwechete kuenda pane chimwe.
Zvidumbu zviviri zvechipenyu chega chega zvinomiririra kuti Testamente yekare neTestamente Itsva zvakabatana pamwechete kuti zvitiudze nyaya imwechete.
Zvinomiririrawo kuzviratidza kwaMwari panyama uye paMweya.
I Timotio 3:16 Hakuna ungaramba kuti chakavanzika chokunamata chikuru kwazvo, chokuti: Iye Mwari wakaratidzwa panyama,
PaCalvari Mweya Mutsvene wakabuda kubva muMumuviri waJesu wechibairo.
Bhaibheri rinoita Bhuku idzva kwauri kana uri muParesitina kana muOrienti, nyika dzekumabvazuva. Ibhuku rekumabvazuva. Ibhuku idzva kana mukariona muchiedza chevanhu vekumabvazuva.
Uye muzuva iroro sungano yakaitwa sei, vakaita chii, vakatora mhuka vakaiuraya. Vakauraya mhuka, vakanyora sungano papepa kana padehwe regwayana, vakainyora ipapo, vakatora izvozvo, vakacheka nepakati pamusoro pemutumbi wemhuka yakafa. Munhu mumwechete akatora chidimbu chimwechete, mumwe munhu akatora chimwe, vakapika kuna Mwari, kuti kana vakaparadza sungano iri pakati pavo iyi, miviri yavo ngaiitwe seyemhuka dzakafa idzi. Isungano inobatanidza. Iyo ndiyo nzira yakasimbiswa nayo sungano naMwari kuna Abrahama.
……. Zvino, tarirai, Kristu paaive panyika, Mwanakomana waMwari, uyo Isaka umwe mwana waakavimbiswa, aizoziva sei kuti aizomuita? Aitaura naye zvaaizoita nekuuraya zvipo zvezvibairo izvi, achitaura pamusoro paKristu.
Mwari akaitei paCalvari kuti asimbise sungano? Akatora Mwanakomana wake akaenda naye paCalvari; pamuchinjikwa paCalvari akamurovera. Akati , “Baba muruvoko rwenyu ndinoisa Mweya wangu”. Iye ---Mwari akabvisa Mweya kubva kumuviri, akatora muviri kuuisa mukubwinya (munozvitenda here?) agere paruvoko rwerudyi rwaMambo, akatumira Mweya Mutsvene waive maari, kukereke kunosimbisa nekuita chinhu chimwechete chaakaita ari pano panyika, kunyora sungano pano nepapo....
Uye hama, nzira imwechete panyika ichachengetedzwa sungano, kana yaichachengetwa, ndipo iwe neni patichagamuchira rubapatidzo rweMweya Mutsvene rwakabviswa naMwari pana Kristu akaruunza kwauri neni. Nzira imwechete yatichagona kuenda nayo Kudenga ndipo muviri unouya kuzogamuchira Mweya zvakare, vanhu vanokwira kudenga ndivo vari musungano. Uye sungano ndiko kudzingiswa nerubapatidzo rweMweya Mutsvene, ndivo vana vaAbrahama. Amen. Hwaa. Ndinonzwa kuda kuzvidaidzira. Mai.
Mwari akaita sungano, akapatsanura Kristu paCalvari. Uye paPentecosti, akatumira rubapatidzo rweMweya Mutsvene, Mweya waive muna Kristu uri mauri uye wava chisikwa chitsva. “Mabasa” Kristu akati, “Zvandinoita muchazviitawo; kusvika pakuguma kwenyika ndichava nemi.” Hareruya. PaCalvari, mazana emakore akazotevera, akatora Mwanakomana wake, akapatsanura muviri wake, mweya wake nemuviri wake, akasimudza muviri wake akauisa kuruvoko rwake rwerudyi, akatumira Mweya Mutsvene kukereke kunoenderera mberi nemabasa aShe Jesu kusvikira achidzoka.
56-0816 KUSHANDA KWEMWEYA MUTSVENE
Akanyora sungano ... muTestamente Yekare munzvimbo tsvene, gumi remitemo raive rakanyorwa pamatafura emabwe. Asi iye akataura akati, mumashure memazuva aya ndichadurura mweya wangu, ndigonyora sungano yangu pamatafura emoyo yavo, nendangariro dzavo” Amen. Mazviona?
Zvino Mwari kupfurikidza Mweya Mutsvene, akapupura kutenda munaKristu, achiunza Mweya Mutsvene unonyora sungano yerugare mumoyo yenyu. Zvino Mweya waive munaKristu wakabva wagara mamuri, wokuitai kuti muite hupenyu hwakaita sehwaKristu. Uye imomo, Mwari akaisa muchikwata chevanhu ava, chinodaidzwa kuti muviri wake: mapostora, vaprofita, vadzidzisi, vavangeri, nevafundisi.
VAHEBERU 8:10 Nokuti ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri Kana mazuva iwayo apfuvura, ndizvo zvinotaura Ishe; Ndichaisa mirairo yangu pakufunga kwavo, napamoyo yavo ndichainyora, ndichava Mwari wavo, Ivo vachava vanhu vangu.
Chinangwa chikuru chesungano chaive chekutora Mweya Mutsvene wakabuda munaJesu Kristu paCalvari nekutumira Mweya Mutsvene iwoyo kudzoka mumoyo yevarume nevakadzi vakatendeuka kuti vararame hupenyu hwakaita sehwaKristu.
GENESISI 15:11 And when the fowls came down upon the carcases, Abram drove them away. Ipapo magora aka­burukira kunyama, asi Abhuramu wakaa­dzinga
Magora mucherechedzo wechii?
MARKO 4:3 Teererai, mukushi wakabuda kundokusha
4 Wakati achikusha dzimwe mbeu dzakawira panzira; Shiri dzokudenga dzikavuya dzikadzidya.
MARKO 4:15 Vari munzira panokushwa shoko ndivo vanoti kana vanzwa, pakarepo Satani unovuya ndokubvisa shoko rakakushwa mukati mavo.
Saka Satani anoita kuti vanhu varambe Shoko raMwari. Ndiko kuita kumwe kunotungamirira vanhu kunogamuchira chiratidzo chechikara.
Asi abramu aive mutendi muShoko raMwari. Ndicho chikonzero nei asina kuregerera magora anomiririra vanhu vanoramba zvimwe zvidimbu zveBhaibheri vachiti hazvina kukosha kana hazvina maturo kana kuti zvakanyorwa zvisiri izvo.
MATEO 24:28 Apo panomutumbi, ndipo pachavunganira magora.
Nyama nyoro kana kuti dzidziso dzakapihwa kunguva imwe neimwe.
VAHEBERU 6:6 Kana vakazotsauka, hazvibviri kuvavandudza zve kuti vatendevuke, nokuti vanozvirovererazve Mwanakomana waMwari pamuchinjikwa, vachimunyadzisa pachena.
Vaya vakarasika vakaramba Magwaro akaziviswa vanorovererazve Jesu. Asi vatendi vechokwadi, makondo, vanoda Shoko iroro rakarambwa, rakaziviswa renguva yedu riri kutukwa nevamwe.
Takayambirwa. Kune ruvengo pamusoro pezaruriro yeShoko rechokwadi mazuva edu atiri kurarama. Tenda kuchokwadi unenge usingadiwi.
Mwari zvino vakaisa Abrahama pakuvata kuti amuratidze kuti aive asina chekuita nesungano iyi. Isungano iyi iri maererano nekuita kwaMwari chete. Boazi akasunungura Rute. Chakaitwa naRute kwaive kuvata patsoka dzake nekumirira kuti Boazi aite chikamu chekuva musununguri wake. Aifanira kubvisa shangu dzake. Jesu aifanira kubvisa kubwinya kwake kwese kudenga ouya panyika ozvarwa naamai vanopomerwa zvakaipa muchidyiro chinonhuhwa. Akasangana nemutoro wekutakura zita rekudaidzwa kuti mwana wehupombwe sezvo Maria akaenda kunoona Erisabeta kwemwedzi mitatu asati aroorwa naJosefa, nzira yechokwadi haina kupfava kazhinji kacho.
GENESISI 15:12 Zvino zuva rakati rovira, Abhu­ramu ndokubatwa nehope huru; akawi­rwa nokutya kwakabva parima guru.
GENESISI 15:17 Zvino zuva rakati ravira, kwa­sviba, choto chinopfungaira nezhenje romoto zvakaonekwa zvichipfuura napakati penhindi idzodzo dzenyama.
Zvino tarirai zvaakaita. Akabva ataura kuti, “Abrahama, ndiri kukubvisa panzvimbo. Hausisina chekuita pamusoro peizvi zvachose.” Abrahama akabva avata. Paakavata, chinhu chekutanga chaakaona pamberi pake raive rima dema rakasviba kwazvo: rufu runotarisana nemunhu wese.”Zvaive zvakamborehwa kuvanhu kuti vachafa kumashure kwazvo kutongwa” rima guru, rakaoma rinozunza , akasangana nekutya kukuru. Rima rakawira Abrahama.
MAPISAREMA 23:4 Zvirokwazvo, kunyange ndikafamba mumupata womumvuri worufu, Handingatongotyi zvakaipa; nokuti imi muneni; Tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza.
Asi mumashure mezvo akaona zhenje remoto raipfungaira. Mutadzi wese anofanira kuenda kugehena. Mwari anosimbisa sungano yake zvino ... Tarirai. Mumashure mezhenje remoto rinopfungaira, akaona chiedza chiduku chichena: ruponeso. Chiedza chichena chiduku ichi chakaenda chichipfuura napakati penhindi idzodzo dzenyama, chichisimbisa sungano naAbrahama, chiedza chiduku chichena. Aitaura nezvei? Mumucherechedzo kana uchifunga mafungiro emweya, unobva wazvibata nekukasika. Aive Kristu aaitaura nezvake. Chimwe nechimwe chezvisikwa izvi, imwe neimwe yeshiri idzodzo, zvisikwa, zvese zvaitaura pamusoro paKristu paCalvari. Zvino regai ndizvisvitse kwamuri sezvizvi kuti munzwisise.
56-1209E JEHOVA JIREH
Saka rufu ndirwo runotanga kuuya. Gehena rotevera, zhenje remoto rinopfungaira. Achibva aona chiedza chinopfuta, mwenje. Zvino tarirai. Zvino Mwenje uyu waive pakati penhindi dzenyama idzi achiita sungano, kuti Mwari, rimwe zuva, kupfurikidza mwana wechipikirwa aizomutsa Jesu Kristu kuti asimbise sungano nevanhu vepasi rese, sezvo Abrahama aive baba vemarudzi.
Tarirai, akabva ashandura zita rake kubva pakuti Abramu kuita Abrahama.
Zvidumbu zviviri zvemhuka dzakauraiwa dzikachekwa nepakati zvinomiririra Testamente Yekare neTestamente Itsva. Jesu akauya pakati pemaTestamente aya. MaBhuku mana eEvangeri anomira seyananiso pakati pemaTestamente maviri aya. Paakafa akaenda kunzvimbo dzine rima dzeGehena Mweya wake Mutsvene ndiwo waive Mwenje unopfuta wakatora makiyi erufu negehena kubva kuna Satani. Akarasira zvivi zvedu pana Satani akadarika nepakati pemaTestamente maviri aya kuti ave nechokwadi kuti zvese zvaive muMagwaro uye kuti ave nechokwadi chekuti ruponeso rwedu kubva kugehena rwakasimbiswa.
GENESISI 15:13 Akati kuna Abhuramu, "Uzive kwazvo kuti vana vako vachava vatorwa munyika isati iri yavo, vachava varanda vavo, vachatambudzwa makore ana mazana mana;
Vana vaAbrahama vekubereka vaive maJuda vaizova varanda kuEgipita kusvikira vazosunungurwa naMosesi.
Vana vaAbrahama vemweya, ndivo maKristu akazvarwa patsva munguva dzemakereke, vanozova vatapwa mutsika dzezvitendero uye masangano kusvikira mutumwa wechinomwe auya kuzozivisa zvakavanzika zvakanyorwa muBhaibheri.
57-0106 JEHOVA JIREH
Baba mungadaro makwegura, nemi amai, mungadaro machembera, asi ndichakupai chipipikirwa muShoko raMwari, murumuko muchava vaduku zvakare. Uye ndichakupai vimbiso yeShoko raMwari, hamuzovi ngirozi. Muchava munhu. Mwari akakuitai munhu, kwete kuti akuparadzei, asi kuti akusimudzirei. Chivi ndicho chinoparadza, asi Hupenyu hunokuitai anorarama nekusingaperi. Hamuzovi ngirozi. Muchava.... Kana Mwari aida kukuitai ngirozi, angadai akakuitai ngirozi. Aikudai muri murume nemukadzi, saka akakuitai saizvozvo.
Saka akatora Mwanakomana wake, akamuita semunhu wenyama anotadza akamuendesa paCalvari (Teererai zvakadzama zvino.), akamuendesa paCalvari ipapo Mwari akanyora sungano yake nerudzi rwevanhu. Oh hama, onai. Akatora Ishe Jesu, akazvideredza pakudanwa uku, akamutora kumuisa paCalvari, akamuparadza. Akatora muviri ukakwira kudenga, akaugadza pachigaro chehushe akatumira chimwe chikamu panyika, chinova Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene mumwechete uyu uri pano panyika, uchigadzira muviri waKristu. Parumuko, panofanira kuva neMweya Mutsvene wechokwadi mumwechete sewakaburuka pazuva rePentecosti, waive munaKristu Jesu uchava mukereke kuti ive musungano iyoyo, zvino munenge mava vana vaAbrahama uye vadyi venhaka yezvinhu zvose! Amen. Mwari akapika kuti achaita saizvozvo. Akavimbisa kuti achaita izvozvo. Akaita sungano achazviita. Akamutsa Kristu kubva kuvakafa kuti aratidze kuti achazviita. Akatumira Mweya Mutsvene kuti uburuke uenderere mberi nebasa raiitwa naJesu paaive panyika kuti azviratidze kwamuri kuti hatina chatinofanira kutya.
Kana inoita senzvimbo yaiitika zvakawanda ine chirevo chikuru pamweya.
Chiratidzo chaMessiasi chiriko kuzivisa ndangariro dzemoyo yevanhu saka nekudaro unokwanisa kuona nzvimbo dzese nenguva dzese.
I MADZIMAMBO 8:39 inzwai henyu iko kudenga kwamunogara, mukanganwire, muite, muripire mumwe nomumwe zvakafanira mufambiro wake wose, iye wamunoziva moyo wake; nokuti imi, imi moga, ndimi munoziva moyo yavana vavanhu vose;
Jesu akamboratidzira hushumiri hwaMessiasi kuna Natanaeri, aive muJuda, aibva kuKana.
JOHANE 21: 2 ... naNatanieri, weKana yeGarirea,
JOHANE 1:47 Jesu akavona Natanaeri achivuya kwaari, akamuti: Tarirai, muIsraeri wazvokwadi, usinokunyengera maari.
48 Natanaeri akati kwaari: Mandizivirepiko? Jesu akapindura, akati kwaari: Firipo asati akudana, uri munyasi momuvonde, ndakakuvona.
49 Natanaeri akamupindura, akati: Rabhi, ndimi Mwanakomana waMwari, ndimi Ishe waIsraeri.
Jesu akaziva zvaida kuitwa naNatanieri akamuona zvaaive amboita kare uye akaziva kuti Firipo aizomudaidza. Natanieri akabva abvuma kuti Jesu aive ndiye Mambo aivimbiswa nekuti aiona zvaiitika munzvimbo dziri kure uye zvakaitika kare munguva, aikwanisawo kuona shuviro dzemoyo yevanhu.
Johane akazivisa Jesu seGondo rinobhururuka, rinomiririra Mwari. Saka Johane anotarisa pazviitiko zvenguva iyoyo muzvikamu zveMuono Mukuru waMwari zvemakore 2000 enhorondo yekereke. Munguva yekereke yekutanga mapostora akaita nheyo dzekereke nenzira yaidiwa naMwari. Ruzivo rwekereke yeKutanga rwakarasika zvikuru sei muNguva yeRima sezvo hutungamiri hwevanhu vanoda kutonga kwazvo hwakabva hwatora nzvimbo. Kuchibva kwauya nguva nhatu dzemakereke dzaive dzemutsiridzo. Muna 1520 Martin Luther kuGermany akatungamirira Rumutsiridzo rwekereke yenguva yeSardisi nekudzosera dzidziso yekuti tinoponeswa nekutenda kwete nemabasa. Iyi yaive nguva yekutanga kana “zuva” rekutanga remutsiridzo.
Makore akapoteredza 1750 John Wesley kuEngland akatungamirira nguva yekereke yeFiradefia paakadzosera chido chekugara muhutsvene nekuparidzira. Izvi zvakabva zvaunza nguva huru yemamishinari yakatanga makore akapoteredza 1790. Iyi yaive nguva yechipiri (kana kuti “zuva” repiri) rekudzosera kereke pakutenda kwekutanga kwekereke yeTestamente Itsva.
Nguva yechitatu yemutsiridzo, nguva yekereke yeRaodikia, ine zvikamu zviviri. Muna 1904 kwaive nevhuserere yeveWelsh uye muna 1906 kwakaitika vhuserere ine mbiri yeAzusa Street kuLos Angeles yakadzosa simba remweya rinoshamisa rerubapatidzo rweMweya Mutsvene. Zvino pakati pegore 1947 na 1965 William Branham kuAmerica akatanga kutidzosera kuzvakavanzika zvakanyorwa zvakaziviswa kunguva yekereke yekutanga zvikazorasika muNguva yeRima. Zvakavanzika izvi hazvina kunzwisiswa zvakanaka nevamutsiridzi vekutanga.
Saka, nekuva pamagumo enguva yekereke yeRaodikia, tiri “muzuva” rechitatu rekudzoserwa kwechokwadi cheTestamente Itsva. Basa redu nderekutsvaga zaruriro yezvakavanzika zvakanyorwa muBhaibheri.
Kupupura kwekupedzisira kwerubapatidzo rweMweya Mutsvene ndiko kuzivisa zvakavanzika zvakanyorwa muBhaibheri patinodzoserwa pakutenda kwekereke yeKutanga.
Sardisi, Firaderfia, Raodikia. Nguva nhatu dzekutidzosera pakutenda kwekereke yeTestamente Itsva. Pakupera kwenguva yechitatu yekudzoserwa (“zuva” rechitatu) kereke ichadaidzwa kukwira Kudenga kumuchato weGwaiana neMwenga waro.
Kereke yeRoman Catholic inotsanangurwa saamai vemhombwe, vanasikana vacho ndiwo masangano asiri maCatholic nemamwe magungano ese. Iro shoko rekuti sangano harisi muMagwaro saka rinotovabvisa pakuva vanotevera Magwaro. Mamwe makereke ese, vasingatore zvakataurwa nehama Branham vachizvidzosera kunozvitarisa muMagwaro, havazonzwisisi zvakavanzika zvakaziviswa. MaKristu iwayo achasiya zaruriro yakadzama vachiti haina kukosha kana kukwanira. Saka havazogoni kunzwisisa Magwaro mazhinji, akafanana nekuti nei Jesu akanyora kaviri nemunwe wake muvhu paakabvunzwa pamusoro pemukadzi mutadzi aida kutakwa nemabwe. Saka vacharamba vachisimbirira padzidziso dzavo dzisiri idzo uye mukusaziva kwavo.
JOHANE 2:1 Nezuva retatu mutambo wokuwana waivapo paKana yeGarirea; namai vaJesu vakanga varipo.
Mukadzi anomiririra kereke sezvo kereke yechokwadi ichidaidzwa kuti Mwenga waJesu.
Maria anomiririra kereke yekutanga yeTestamente Itsva munguva yekereke yevaEfeso yakazopera makore akapoteredza 170 AD. Kereke yekutanga iyi ndiyo yaizotakura Shoko raMwari, sekumbotakura kwakaita Maria Jesu. Johane haana kubvira amudaidza nezita rake. Nei? Johane ane muono wemweya wakadzama. Kereke yechokwadi inofanira kungodaidzwa kuti vadzidzi kana kuti vaKristu. Hakuna kereke inofanira kuita zita rakafungwa nemunhu rakaita serekuti Roman Catholic, Lutheran, Methodist, Pentecostal, Message believers (ndivo vatendi veMharidzo) nevamwe vakadaro. Kereke yekutanga yeTestamente Itsva haina kubvira yaita izvi. Vaingove maKristu, vaiita saKristu.
Mukadzi wekutanga akazoita zita rake rekuti Eva mumashure mekunge aita chivi. Panongotora makereke zita rekereke, zvinobva zvareva kuti vawira muchivi kana mukusatenda.
Nekuziva kuti kereke yekutanga yaizodaidzwa kuti maKristu, Johane haana kudaidza mai vaJesu nezita. Pakutanga kwekereke yekutanga, hakuna kereke yaive nezita. Izvi zvinoratidza kuti kereke yekutanga yeTestamente Itsva ndiyo yaive mai vemakereke vaifanira kuzotevedzerwa hunhu hwavo nemamwe makereke ese. Kereke yeRoman Catholic inozviti mai vemakereke asi vakazotanga kutora masimba avo aya nehupfumi mumashure mekanzuru yeNicene muna 325 AD.
Kereke yekutanga yakatangwa nevapostora ndiyo mai vemakereke.
EKSODO 20:12 Kudza baba vako namai vako, kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako.
Murairo wechishanu uyu unodzidzisa vana kuti vakudze vabereki vavo. Asiwo une chirevo chemweya chakadzama.
Tinofanira kudzokera kumadzibaba mapostora akanyora Testamente Itsva. Tinofanira kudzoserwa pakutenda kwekereke yekutanga inova mai vemakereke vechokwadi. Izvi zvinotipa hupenyu huzhinji sezvo maKristu akafa achamutswa uye vanorarama vachapihwa miviri yekubwinya isingazofi. Pamwechete tinozorarama nekusingagumi panyika naIshe Jesu. Uhu huchava hupenyu hurefu kwazvo.
Kereke yenguva yekupedzisira inofanira kudzoserwa pakutenda kweBhaibheri uye pahunhu hwekereke yekutanga.
Mbeu yechibage inodyarwa zvino, yadarika nezvikamu zvakati kuti inobereka mbeu yakafanana nayo yatinokohwa.
Munana wekupedzisira uchaitwa naJesu ndewekushandura Mwenga wake kumupa muviri wakafuka kusavora omudaidza kuchirairo chemuchato Kudenga.
ZVAKAZARURWA 19:7 Ngatifarei, tifarisise, timukudze; nokuti mutambo wokuwana weGwaiana wasvika, mukadzi waro wazvigadzira.
8 Wakapiwa simba kuti apfeke mucheka wakanaka, unopenya, usinetsvina; nokuti mucheka wakanaka ndizvo zvakarurama zvavatsvene.
9 Zvino akati kwandiri: Nyora, uti: Vakaropfadzwa vakakokerwa kuchirayiro chokuwana cheGwaiana. Akati kwandiri: Mashoko awa ndaazvokwadi aMwari.
Mukadzi mucherechedzo wekereke. Mwenga wenguva yekupedzisira, kereke yechokwadi, inofanira kuzvigadzirira kuti ikokerwe Kudenga naJesu kuchirairo chekuwana. Haasi munhu wese wese achatenderwa kuenda kumuchato uyu. Munhu mumwe nemumwe anofanira kukokwa. Tese takamirira mhere yepakati pehusiku yekutidaidza. Kusvikira ipapo, makereke ese, vasikana vakangwara zvese nevakapusa,vakarara mutsika dzavo dzevanhu. Mhandara ndivo vasikana vakachena, vanomiririra maKristu akaponeswa. Vakarara mukuzvikudza kwavo uye hunhu hwemakereke avo hwekuzviyananisira.
MATEO 25:5 Zvino chikomba chakati chichinonoka vakatsumwaira vose vakavata.
6 Pakati povusiku vakanzwa mhere-mhere, tarirai chikomba chovuya, budai mundochichingamidza!
Mhere kubva kunze kwekereke iri kudiwa kuti imutse kereke kuti ive pachokwadi uye kuvamanikidza kurasa tsika dzavo dzese dzakavapofamadza.
“Budai”. Chero kereke yamuri haisi kuzokugadzirirai. Munofanira kubuda mairi munosangana naMwari.
Rumuko ruchaitika nenzwi reMutumwa mukuru. Mhere yezwi iri ichamutsa makereke akarara.
Mharidzo yaWilliam Branham yaive mhere yekuzivisa zvakavanzika zvakanyorwa muBhaibheri zvinozogadzirira Mwenga kuuya kwaShe nekudzoserwa kudzidziso dzekereke yekutanga.
MATEO 17:11 Akapindura, akati, Eria uchavuya hake, avandudze zvinhu zvose
Asi kunyangwe izvozvo hazvimutsi kereke .
63-0320 THE THIRD SEAL CHISIMBISO CHECHITATU
Zvino, ndicho chikonzero nhasi kuti isu tinofanira kuita mavhuserere. Tine rumutso rwemasangano, hatina kusanganiswa kwakazara. Kwete, kwete, kwete, kwete. Kwete, baba. Musafunge kuti tine rumutso. Hatina. Oh, vane mamiriyoni nemamiriyoni nemamiriyoni enhengo dzekereke, asi havana rumutso. Kwete, kwete.
Mwenga haasati amutswa. Mazviona? Hakuna rumutso ikoko, hakuna kuonekwa kwaMwari kuti asanganise Mwenga. Mazviona? Takakutarisira. Kuchatora kutinhira kunomwe kusina anoziva kuti kumumutse zvakare. Achakutumira. Akavimbisa. Zvino, zvino, tarirai. Zvino, aive afa.
Mumashure memhere, inova mharidzo ichiparidzwa, ipapo tinobva tazonzwa izwi remutumwa mukuru paanouya panyika achimira akatsika imwe tsoka panyika imwe mugungwa achidaidzira kuvakafa vakavigwa mo.
Izvi zvinoitika kanaBhuku razarurwa. Zvinoitika kana zvakavanzika zvaziviswa.
Kutaura kwese “akadanidzira nenzwiguru” uye “Akati adanidzira” zvinomiririra kumutswa kwevakafa.
JOHANE 11:43 Wakati areva izvozvo, akadanidzira nenzwi guru, akati: Razaro, buda!
MATEO 27:50 Zvino Jesu akadanidzirazve nenzwi guru akabudisa mweya wake.
51 Ipapo tarira chidzitiro chetembere chakabvaruka napakati, kubva kumusoro kusvikira pasi. Nyika ikadengenyeka, mabwe akatsemuka.
52 Mabwiro akazaruka nemitumbu mizhinji yavatsvene vakanga vavete yakamutsva.
Asi, rangarirai, kana tikangopinda mumumvuri werufu, “Ndini Rumuko neVupenyu; ndichamumutsa zvakare.” Uye kana Mukuru wemasimba ose aburuka akaisa hoko iyoyo pasi, ipapo, “nguva haizovapo.”Kana Mutumwa, wekunaZvakazarurwa chitsauko 10, akaisa tsoka yake imwe pamusoro penyika imwe pamusoro pegungwa, nemurarabungu pamusoro pake, Anopika, “Nguva haizovapo zve.” Kana nguva iyi ikasvika, muchamuka kubva pakati pevakafa. Vamwe vose vakarara pakadaro apo, imi muchapinda.
Saka Mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10 ndiye Mutumwa mukuru anomutsa vakafa. Kurira Kunenge kweshumba anenge ari Shumba yerudzi rwaJuda achimutsa vakafa kuti akunde kurwa pamusoro paSatani.
Kutinhira kunomwe kuchareva ndiko kucharatidza Mwenga kuti angagamuchira sei kutenda kwekukwira kudenga.
Uye kunobva kwauya kutinhira kunomwe kwakavanzika kusina kubvira kwakanyorwa zvachose. Ndizvo chaizvo. Uye ndinotenda kuti kupfurikidza kutinhira kunomwe ikoko kuchaziviswa mazuva ekupedzisira kuti Mwenga agadzirirwe kuti ave nekutenda kwekukwira kudenga.
Zvino miviri yevapenyu yoshandurwa yofuka kusavora panguva yeKutinhira kunomwe. Zvino Hwamanda yaMwari inobva yarira kuvadaidza kuti vakwire kuchirairo chemuchato kudenga.
(NaTrump ari mutungamiri wenyika zvinoreva kuti munhu wese ari kutaura nezvaTrump. Ichi chiratidzo chenguva uye iyambiro kwatiri kuti nguva yeHwamanda (Trump) yaMwari yasvika. Mutungamiri wenyika Trump akaparadzira yambiro zhinji uye zvinhu zviri kuenda nenzira yakasiyana neyaitarisirwa nevanhu. Iyi iyambiro kuti tinofanira kudzidza kutarisira zvisina kutarisirwa.)
Pakuuya kwake kwekutanga, Jesu akauya nenzira yakasiyana kwazvo neyaitarisirwa nevanhu pakuuya kwaMessiasi wavo. Josefa naMaria vaive vanhu vasingazivikanwi. Nazareta raive guta rezvakaipa. Vanhu vaiti Jesu aive mwana wehupombwe nekuti Maria akaita pamuviri paJesu akaenda kuna Erisabeta kwemwedzi mitatu asati aroorwa.
Saka Kuuya kwechipiri kwaJesu kuchava kwakasiyana kwazvo kune zvatinotarisira. Tinofanira kuva patsoka dzedu kutsvaga ruzivo rweBhaibheri.
Ngatitarisei muchato wekutanga paKana kuti tiwane gwara remamiriro ezvinhu pamuchato wekupedzisira neGwaiana Kudenga.
JOHANE 2:2 NaJesu navadzidzi vake vakanga vadamwa vo kumutambo wokuwana.
Vadzidzi vaJohane Mubapatidzi vaive vasina kukokwa, asi vadzidzi vaJesu.
Vadzidzi vaWilliam Branham havasi kuzokokwa, asi vadzidzi vaJesu chete anova Shoko raMwari.
Hakuna anoenda kumuchato kunze kwekunge akadanwa.
ZVAKAZARURWA 4:1 Shure kwaizvozvo, ndakatarira ndikavona mukova wakazaruka kudenga; nenzwi rokutanga randakanzwa rakaita serehwamanda richitaura neni; richiti: Kwira pano,
“Shure kwaizvozvo”. Mumashure mekupera kwenguva dzemakereke Johane akadaidzwa Kudenga pakupera kwenguva dzemakereke. Tinoenda kudenga kana Mwari atidaidza chete.
Jesu ndiye Shoko raMwari rakazara. Vanotenda kuShoko rakanyorwa rikaziviswa chete ndivo vachakokwa kuchirairo kumuchato weGwaiana. Ava ndivo vadzidzi vanosimbisa kutenda kwavo neMagwaro.
Tinofanira kungwarira. Mwari anotidaidza kupfurikidza Shoko rake. Kana tisinganzwisisi Bhaibheri Shoko raMwari tichagara netsika dzemakereke edu tichirega kuita zvinodiwa neMagwaro akaziviswa. Ipapo hatizokokwi kuchirairo chemuchato.
Mumufananidzo muEvangeri raRuka, munhu akagadzira chirairo akakoka vanhu vese vakakosha (maKristu akaponeswa). Hakuna akadavira pakukokwa uku (vakagara netsika nezvido zvemakereke avo) saka akavasiya vese akasarudza vanhu vakaipa pachinzvimbo chavo.
Vanhu vanoti Trump akaipa. Ichi ndicho here chiratidzo chekuti Mwari akusiya vakanaka achienda kuvakaipa?
Saka chirairo chemuchato cheGwaiana chichave chakasiyana kwazvo nezvatinotarisira isu. Hachisi chenhengo dzekereke ndakatendeka kumitemo yekereke vanoda kereke yavo kukunda kuda kwavanoita Jesu. Chiriko kuitira vanhu vakazvimiririra vanotenda kuShoko rakaziviswa kunguva yekupedzisira.
JOHANE 2:3 Waini yakati ichizoshaikwa, mai vaJesu vakati kwaari: Havachine waini.
Waini inomiririra kumutswa kwezaruriro. Waini chaiyo inoita kuti munhu afare. Asi mufaro iwoyo unokasika kupera. Waini yeMweya kufadzwa nekuwana zaruriro yezvinoreva Magwaro. Muono wakadzama uyu unotisimudzira kuti tide kudzidza Bhaibheri zvakawedzerwa nekuita nguva refu tichitaura uye kufunga nezveBhaibheri kuti tive nekunzwisisa kwakadzama. Mufaro uyu unogara matiri wokura nekuziva Shoko kwatinenge tichiramba tichiwedzerwa.
Maria, semunhukadzi, anomiririra mai vemakereke kana kuti kereke yakatanga nemapostora enguva yekereke yekutanga. Kereke yekutanga iyi yaifanira kuva kereke inobereka mamwe makereke ese akazotevera. Makereke ese akazotevera aifanira kufanana nekereke yekutanga yeBhuku raMabasa avapostora.
Semunhukadzi Maria akakumbira waini yekunwa nekuti waini yaive yapera.
Jesu anopa mhinduro inoita seinopesana zvakazara nezvaikumbirwa.
JOHANE 2:4 Jesu akati kwavari: Ndineiko nemi, mai? Nguva yangu ichigere kusvika.
MuEvangeri raJohane Jesu anoratidzwa seGondo rinoona zvese riri mudenga denga pamusoro pazvose unova mucherechedzo waMwari.
Saka Jesu anotarisa pachiitiko chepanzvimbo achichiona semucherechedzo wezvinhu zvakadzama pamweya.
Akamudaidza kuti mai. Haana kumudaidza kuti amai. Nekuda kwei? Muviri wake wenyama waive wakasikwa naMwari. Maive musina kana chidimbu chaMaria pana Jesu. Maria akangova mutakuri chete wemimba. Mwari ega ndiye Mutsvene.
Aitaurawo kuti aive asiri amai veMweya waive maari waiita minana.
RUKA 1:35 Mutumwa akapindura, akati kwaari: Mweya Mutsvene uchavuya pamusoro pako, nesimba roWokumusorosoro richakufukidza; saka icho chitsvene chichaberekwa chichanzi: Mwanakomana waMwari.
Mwana aive mumimba maMaria aive mutsvene. Saka aive akasikwa naMwari zvakazara sezvo Mwari ega ari ndiye Mutsvene. Mweya Mutsvene waMwari wakabva wazvivanza muMwana iyeye.
Jesu aitarisa Muono Mukuru. Mukadzi Maria aimiririra kereke yekutanga yenguva yeTestamente Itsva. Aikumbira waini, kusimudzwa kwezaruriro. Asi izvi hazvigoneki nekuti zaruriro inopihwa chete neMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene waive mutsinga dzaJesu waizoburitswa paCalvari paaifa. Kubva ipapo waizodzoka kukereke pazuva rePentecosti. Izvi zvakasimudza vadzidzi vake zvikuru zvekuti vakatanga kutaura nedzimwe ndimi dzaitonzwisiswa nemamwe marudzi. Vakadzadzarika sevanhu vakadhakwa.
Mupostora Petro akazotsanangura kuvazhinji kuti vadzidzi vaive vasina kudhakwa nekunwa waini, vaive vakasimudzwa kwazvo nerubapatidzo rweMweya Mutsvene rwaive rwavapa zaruriro yakadzama yehurongwa hweEvangeri reruponeso.
MABASA 2:15 Nokuti ava havana kubatwa sezvamunofunga imi, zvaichiri nguva yechitanhatu yezuva,
Saka Jesu paakataura naMaria, aifunga pamusoro peMuono Mukuru wekuti kereke yaizowana chete waini yemweya yaisimudza zaruriro kana iye achinge afa pamuchinjikwa Mweya Mutsvene waburuka pazuva rePentecosti. Maria panguva iyoyo, aive asina ruzivo rwekuti Jesu aitaura nezvei.
Hatifaniri kufa takataura kuti Magwaro haana kukosha nekuda kwekuti hatimanzwisisi.
Nekukatyamadzwa nemhinduro yake, zvakadaro Maria akaziva kuti Jesu ega ndiye aikwanisa kuita munana uyu. Akaburitsa pachena kutenda kwake nekuudza varanda vaivepo kuti vaite sekureva kwake. Tinofanira kuteerera zvese zvatinoudzwa kuti tiite neShoko. Kunyange rikatiudza kuti tiite zvinhu zvatisina kutarisira zvachose. Musafunge kuti Mwari anofunga nenzira imwechete nesu. Musatarisire Mwari kuti aite zvinhu nenzira yemafungiro enyu.
JOHANE 2:5 Mai vake vakati kuvaranda: Itai zvose zvaanokuvudzai.
Kugadzirira kushandurwa kwemweya, varanda vaifanira kuteerera Jesu. Kana nesuwo tichida kushandurwa kupihwa miviri mitsva tinofanira kungwarira kuteerera Shoko. Teverai hutungamiri hwevanhu munopesana nechinhu chikuru. Teverai tsika dzekereke mupesane nechinhu chikuru. Itai chete zvinotaurwa neShoko. Kereke yechokwadi, saMaria, inoudza varanda kuti vateerere Bhaibheri chete, anova Jesu muShoko.
JOHANE 2:6 Zvino kwakanga kunamakate matanhatu amabwe, akanga aiswapo netsika yavaJudha yokuzvinatsa, rimwe nerimwe raizadzwa nezviyero zviviri kana zvitatu*
Tanhatu chiverengo chemunhu. Munhu akasikwa nezuva rechitanhatu. Nomwe chiverengo chekukwanisa, semazuva manomwe anoita svondo rakakwana. Tanhatu haina kukwanira nechiverengo chimwechete. Munhu anotadza kukwanira nekuda kwezvivi muhupenyu hwake.
Makate matanhatu anoisa kukosha pamunhu.
Makate aive akaitwa nemabwe.
Izvi zvinoratidza kuoma kwemoyo wemunhu takatarisana neShoko raMwari. Hatingodi kuteerera zvakanyorwa muShoko raMwari. Tinosarudza kuzviitira mirairo yedu uye dzidziso.
ZEKARIA 7:12 Zvirokwazvo, mwoyo yavo vakaiita sedhaimani, kuti varege kunzwa murayiro namashoko akatumwa naJehovha wehondo noMweya wake navaporofita vakare; saka kutsamwa kukuru kwakabuda kuna Jehovha wehondo.
Kuita sedhaimani zvinoreva kuti kuoma moyo kusada kushanduka. Vanhu vanoongorora mabwe vemazuvano vasati vaisa mutsara vachienzanisa kubva pane riri pamusoro pakuoma kwemabwe, dhaimani ndiro raionekwa sebwe rakaoma kwazvo, rakafanana nedhaimondi chicherwa chakaomarara kwazvo.
Zekaria akataura kuti moyo yedu vanhu inowoma kwazvo kana tikasarudza kuramba Shoko raMwari kuti tirarame nenzira dzedu dzatinoda.
Mwari akanyora gumi remitemo pamabwe kuratidza kuti moyo yevanhu yakaoma sei.
II VAKORINTE 3:3 Makavonekwa kuti muri mwadhi yaKristu, yakagadzirwa nesu, isina kunyorwa neinki, asi noMweya waMwari mupenyu; isina kunyorwa pamahwendefa amabwe, asi pamahwandefa enyama omoyo.
Hurongwa hweruponeso huri pazvinhu zviviri zvakakosha.
Chekutanga, Jesu akaripira muripo wakakodzera kuti tiponeswe. Akaita izvi paCalvari.
Chechipiri, tinofanira kumutendera kuti apfavise moyo yedu nekuwisira kuda kwedu kwaari.
Mwari anozoita zvinhu zvitatu muhupenyu hwedu kuti atigadzirire kubata kwake.
Chekutanga kutiponesa patinomugamuchira seMuponesi wedu. Anenge ava muponesi wedu asi haasati ava Ishe wedu. Vanhu vanoda Jesu kuti Jesu avaponese asi haafaniri kuvaudza kuti vopfeka sei, voita hunhu hwakadii, kana kuti votenda mune zvipi.
Danho repiri ndiko kunatswa patinotura kuda kwedu kuti titendere Jesu kuti atinatse nekutichenesa muhupenyu hwedu torarama hupenyu hutsvene.
Danho rechitatu ndirwo rubapatidzo rweMweya Mutsvene patinomutendera kutonga hupenyu hwedu nekuzivisa Magwaro kwatiri. Tinobva tatura kuda kwedu kwaari. Ipapo ndipo patinenge takukwanisa kuita kuda kwaMwari.
Asi kana Mwari vachishandisa munhu vachimukomborera nezvipo zvemweya nekubudirira papfuma yemaoko, hazvisi nyore kuti munhu iyeye asafunge kuti vamwe vanhu vari pamusoro pevamwe.
54-0306 SUNGANO ISINA MIGANHU YAKAITWA NAMWARI KUVANHU VAKE
“Zvakanaka makabatwa zvakanyanya kumapeto.” ndinoisa izvozvo kuzvizadzisa. Ndinobva ndaona kuti zvinotora pakadii kuti tirarame kusvika musi wekusangana kwedu kunotevera. Chii chinenge chasara chezvinhu izvozvo, ndinochiisa pamabasa ekunze. Ichokwadi. Kwandiri handina chandinotora. Mbatya dzangu zhinji nezvinhu zvandinazvo ndakazvipiwa. Vanhu vanondipa. Tinorarama sevamwe vanhu vese, kana Mwari ari kudenga achiziva ndingadai ndiri nemamiriyoni nemamiriyoni dai ndaida.
Asi zviri kure kwazvo neni kuti nditore Evangeri raJesu ndiritengese. Handidi muhupenyu hwangu kufa ndakaita mhosva yakadaro. Uye handidi zvachose.
Chinhu chekutanga kumushumiri imari, chinotevera kurarama kwakaipa muzvivi, icho pandaive ndiri mutadzi, ndaiedza kurarama zvakachena uye zvakarurama. Zvino chinhu chinotevera ndiyo mbiri.
Kazhinji kana Mwari akakomborera munhu, akamupa hushumiri, anotanga kufunga kuti ari pamusoro pevamwe. Ipapo ndipo paanenge aita nzira yake yekubuda nayo.
Kunobva kwauya danho rechina, danho rakaoma kwazvo, patinotendera Mwari kutiisa mukuda kwake kwakanaka, muMuono wake Mukuru.
Izvi zvinoramba zviri zvinhu zvakasiyana nezvatinoronga kana kutarisira nekuti tinokanganwa kuti nzira dzaMwari hadzisi nzira dzedu. Kuzviwisira kutsika dzekereke, kutevera munhu, kuzvikoshesa, kuda pfuma, rudo rwekuonekwa setakangwara, rudo rweboka kuda kunzi tinobva kusangano zvinotipa kutya kurambwa, nechido chekuva nesimba pamusoro pevamwe, nekuti maKristu akazvarwa patsva anoramba nzira yakamanikana yeMagwaro.
ISAYA 55:8 Nokuti ndangariro dzangu hadzizi ndangariro dzenyu, nenzira dzenyu hadzizi nzira dzangu ndizvo zvinotaura Jehovha.
Saka kune maKristu mashoma kwazvo anosimbisa kutenda kwavo neBhaibheri reKing James seShoko raMwari chairo.
Hazvisi kunzwika kunge Jesu ari kutaura pamusoro pemakereke makuru nemasangano makuru kana ungano huru.
Kuzvinatsa zvinoreva kuzvisuka. Uyu mucherechedzo wehutsvene. Asi Mwari ega ndiye Mutsvene. Izvi zvinoratidza kuti rubapatidzo rweMweya Mutsvene runotigonesa kurarama muhutsvene uye kubvisa kusatenda mukufunga kwedu kuti tisangane nekunzwisisa zaruriro yeMagwaro akaziviswa.
Chiyero chavaidaidza kuti firkin muchirungu chaive chikamu chimwechete muzvikamu zvina zvegaroni remupimo wemakumi matatu nemana, saka paizobuda magaroni aida kusvika mapfumbamwe.
Saka makate aya aitakura mipimo yakasiyana. Mwari anopa mupimo wakasiyana weMweya kuvanhu vakasiyana zvichienderana nekuti anoda kuti vamuitirei.
Kana takaponeswa nenyasha kupfurikidza kutenda, zvinoreva kuti hatiende kugehena.
Danho rekutanga ndiko kuponeswa kubva kugehena. Izvi zvakakosha. Kugamuchira Jesu seMuponesi wedu, hazvirevi kuti ava Ishe wedu. Tinoda kuti atiponese asi haangaedze kutiudza kuti topfeka sei uye toita hunhu hwakadii. Tinoda kuponeswa tichiramba takasununguka kuita zvatinoda nemanzwiro emoyo yedu anotatamuka asingagoni kutidzora.
Asi hupenyu hauna kupfava.
I VAKORINTE 12:3 Vuye, hakunomunhu ungati: Jesu ndiye Ishe, asi noMweya Mutsvene.
Tinodawo kuti muponesi wedu ave Ishe wedu. Jesu anoda kuva Ishe muhupenyu hwedu, muzvinhu zvese. Tinowanzotadza kuona kuti kune imwe nhanho yekumberi yeruponeso, kwete kubva kugehena, asi tinodawo kuponeswa kubva kunguva yeKutambudzika kukuru kupfurikidza kutorwa kukwira kumakore pakuuya kwaShe.
Tinofanira kuponeswa kubva kuvasikana vakavata, vasikana vakanaka vanorarama hupenyu hwakachena, (mucherechedzo wemakereke akaponeswa) asi vasina mafuta anomira ari mucherechedzo weMweya Mutsvene. Mafuta anotipa mwenje. Mwenje unoshandiswa kuona. Pasina mafuta havana mwenje wakakwanira kuti vaverenge Bhaibheri. Havagoni kuona zvinenge zvichirehwa neBhaibheri. Kana vakabvunzwa, “Nei kuine maBhuku mana eEvangeri?” kana kuti “nei kuna Mateo mukadzi akabata Jesu tsoka mumashure mekumuka kwake kubva kuvakafa asi kuEvangeri raJohane Jesu anoti kuna Maria, “Usandibate”? Tinovhariridza kusaziva kwedu nekunzvena mibvunzo nezvinhu izvi tichiti hazvina kukosha. Tinoda mwenje wakakwana kubva kumafuta eMweya Mutsvene kuti tigone kuona kuti zvakavanzika izvi zvakavanzwa muBhaibheri zvinorevei.
Kuponeswa idanho rekutanga, tinoda rubapatidzo rweMweya Mutsvene patinopa hupenyu hwedu kuna Jesu kuti atonge iye.
VAFIRIPI 2:12 ,.... pedzisai kuponeswa kwenyu nokutya nokudedera
Hatigone kupedzisa kuponeswa kwedu tichibva kugehena. Ndicho chipo chimwechete chenyasha chatinogamuchira nekutenda sezvo chisingawanikwi nekuda kwemabasa akanaka atinoita.
Asi zvatinoita kana kutenda mazviri kana taponeswa kubva kugehena zvinobatawo pamikana yedu yekudaidzwa kuchirairo chemuchato neGwaiana Kudenga. SepaKana, tinofanira kudaidzwa kuchirairo chemuchato neGwaiana. Saka tinofanira kuziva zvatinofanira kuita nezvatinofanira kutenda mazviri.
Pamuchato wekutanga Jesu akaisa miganhu yaakaisa. Makate matanhatu (mucherechedzo wedu isu vanhu vazere zvivi) anofanira kuchengeta zviyero zviviri kana zvitatu. Magaroni gumi nemasere kana kuti makumi maviri nemanomwe mupimo wakakura wemvura. MaKristu anokoshesa Jesu neBhaibheri Shoko rake ndivo vachakunda.
Kana muchiti zvimwe zvidimbu zvebhaiberi hazvina kukosha, kana hazvina maturo, kana kuti hazvizokutadzisii kuponeswa kubva kuenda kugehena hamuzodaidzwi kuenda kumuchato. Takadanwa kuti tione nekutsvaga muMagwaro. Magwaro ese akafemerwa uye akakosha.
JOHANE 2:7 Jesu akati kwavari: Zadzai makate nemvura. Ivo vakazadza kusvikira pamiromo.
Saka Jesu akaudza varanda kuti vazadze makate kusvika pamuromo. Kusvika anyatsozara. Akatakura mvura zhinji.
VAEFESO 5:26 Kuti aiite tsvene achiinatsa nokushambidza kwemvura pashoko.
Mvura mucherechedzo weMagwaro. Kutenda kuBhaibheri nekuteerera Shoko kunotinatsa.
Zaruriro yeShoko rakanyorwa chete ndiyo inotiratidza kuti tofamba sei nenzira inodiwa kuti tifambe nayo naMwari. Kwete kuteerera kumifungo nemazano evanhu nekuita kwevatungamiri vemakereke asi kuteerera Bhaibheri.
Kupupura kwerubapatidzo rweMweya Mutsvene ndipo paanogona kuzivisa zvakavanzika zveShoko kumutendi.
Mweya Mutsvene unoita minana asi izvi zvinongoitwawo. Chinagwa chawo chikuru ndechekutungamirira kereke kuti ive nechokwadi kupfurikidza kuzivisa zvakavanzika zveMagwaro akanyorwa.
Saka tinofanira kuzadza midziyo yedu nemvura dzeShoko.
Basa redu tisati tasvika pakuuya kwechipiri kwaJesu kuzadzwa neShoko. Kurirongedza mupfungwa dzedu nemundangariro dzedu. Magwaro ese akanaka uye akakosa, kunyangwe tisingaanzwisisi, maverengei muarongedze mupfungwa dzenyu sekuzadza kwavakaita mvura mumakate.
Zvino chinhu chinoshamisa chakabva chaitika. Pasina chiratidzo chatinoziva, mvura yakashanduka kuva waini.
Paripotyo, nenzira yemunana, anokupa zaruriro nenzira inokutendera kunzwisisa Shoko rakaziviswa panguva yekupedzisira. Asi anoshanda chete nemvura iri mumakate mako. Kana gate rako risina kuzara kusvika pamusoro zvinoreva kuti hauna kukoshesa Bhaibheri anobva asiyana newe. Asi vaya vakazadza ndangariro dzavo kusvika pamusoro kupfurikidza kudzidza Bhaibheri nepavaigona napo uye kunzvera zaruriro yezvakavanzika zvakadzama zvenguva yekupedzisira nekuzvironda neBhaibheri rakanyorwa. Vachazongowana miviri yavo yashandurwa kubva mukuvora vachifuka kusavora. Ipapo vachatorwa kukwira kudenga.
JOHANE 2:8 Akati kwavari: Cherai zvino muise kumukuru womutambo. Vakandoisa.
Saka mvura yakashanduka ikaita waini mukuru wemutambo akafadzwa nayo.
JOHANE 2:9 Zvino mukuru womutambo wakati aravira mvura yakashanduka waini, asingazivi payabva, (asi varanda, vakanga vachera mvura, vaiziva), mukuru womutambo akadana chikomba,
Munhu akakosha, munhu anotungamirira, haana kuziva kuti zaruriro yenguva yekupedzisira iyi yabva kupi. Asi varanda vaive vanhu pasina vakazva.
MARKO 10:42 Ipapo Jesu akavadanira kwaari, akati kwavari: Munoziva kuti avo vanonzi machinda avahedheni anovaraira, navakuru vavo vanoita simba navo.
Chinhu chikuru chinotadza hutungamiri hwechiKristu: kuva mukuru uchituma vanhu kuita zvinhu. Munhu akakosha aive asina ruzivo rwezvaiitika, zvisinei nekuti aive mukuru.
43 Zvino pakati penyu ngazvirege kuva kudaro; asi aninani unoda kuva mukuru pakati penyu, ngaave mushumiri wenyu;
Chinhu chikuru chatingaite kushanda, nekurangarira kuti muranda haana kukosha.
44 aninani unoda kuva wokutanga pakati penyu, ngaave muranda wavose.
MuKristu akanyanya kukosha ndiye muranda anozvininipisa.
Ugatasva chii chakamhurwa kukunda mbongoro?
(Tarisai izvi mafundisi eMharidzo vanofamba nedzimotokari dzakanakisa vachigara dzimba dzine hutefe-tefe.)
Vapostora vakatanga kereke yekutanga vakabva vabva. Jesu haana kubvira ada munhu akakosha kukunda vamwe mukereke yekutanga, aingoda varanda vanobata basa rekutakura mvura yeShoko kuisa kuvanhu.
Kereke yekutanga haina kubvira yaita mufundisi anotonga kereke. Kereke yekutanga yaitungamirirwa nevakuru. Vaivepo kubata basa, kwete kutonga. Vanhu vakakosha havazivi kuti waini chaiyo iripi, kusimudzwa kwezaruriro, kunouya kubva sezvo ivo vakabatikana kwazvo kuzvigadzirira kukosha kwavo vachiita kuti sangano rivanamate.
Jesu akatidana kuti tive varanda. Haadi kuti tive madzishe pamusoro pevanhu.
Varanda vechokwadi ndivo vakuru vasingadi kupihwa mbiri, vanongoda chete kubatira Jesu neShoko rake.
Pauro akadaidza vakuru veguta reEfeso kuti vauye kuMireto.
MABASA 20:17 Zvino iye ari paMireto, akatumira Efeso kundodana vakuru vekereke
29 Ini ndinoziva kuti kana ndaenda mapere anoparadza achapinda pakati penyu, asingaregi boka.
30 Vuye, napakati penyu pamene pachamuka varume, vachataura zvinopesanisa, kuti vatsause vadzidzi vavatevere.
Mapere anoparadza ndivo vashumiri nevafundisi nemabhishopu nemapostora emazuva ano vanomanikidza vanhu kuvatevera. Vapostora vekutanga vaive vanhu vakanaka. Vakaita kereke yekutanga zvichibva panheyo dzeShoko rakanyorwa. Mapostora akazviita mapostora emazuva ano havachararame neShoko rakanyorwa muBhaibheri sezvo vachitsanangura zvakavanzika zvisina kunyorwa. Izvi zvinoita kuti vanhu vafunge kuti vakangwara, asi kungwara hakuna akaponeswa nako.
Chikwata chevakuru ndiyo yaive nzira chaiyo yekutungamirira kereke. Hakuna munhu mumwechete aive nesimba pamusoro pevamwe vanhu.
Nhasi, pamazuva ekupedzisira, hakuna mutongi wekereke akakosha anoziva kuti chokwadi chinobva kupi.
Vatongi vekereke vakakosha nhasi vanosimbirira pamashoko akabatwa paitaura vanhu uye kuturikira zvakataurwa nevanhu. Kana vakuru vemakereke vakakosha vanotonga kereke vachiteerera Bhaibheri, havangazviite vakakosha kana kuva vatongi.
JOHANE 2:10 akati kwaari: Munhu mumwe nomumwe unositanga abudisa waini yakanaka, neisinganaki kana vamwa kwazvo, asi iwe wachengeta waini yakanaka kusvikira zvino.
Mumutsiridzo ega-ega vakaita saMartin Luther John Wesley vakaita kubata kukuru pavanhu asi nekufamba kwemakore pakatanga vateveri vavo kuita masangano kubva pane zvaiturwa nevatungamiriri vavo, mabasa avo akabva aparara. Vaikwanisa kuramba vari vazhinji pahuwandu asi chiremera chekubata kwavo, uye kubata kwekuita kwavo panyika kwakabva kwaipa.
Asi zvakavanzika zvenguva yekupedzisira, kune avo vanotora zvakataurwa nehama Branham vodzokera kuBhaibheri vosimbisa kutaura kwake nekukutsvaga muBhaibheri, vakawana zaruriro iri nani yemicherechedzo yeBhaibheri nemavhesi kupinda zvese zvakaitwa nevamutsiridzi uye kudzidzisa kunoita makereke anhasi.
Mumutsiridzi mumwe nemumwe akabuda achisununguka kubva musangano rekereke remazuva ake, yaive waini yakanaka nekuti yaive zaruriro yakanaka, kurudziro yakanaka inosimudza ndangariro itsva pamusoro peBhaibheri. Asi paifa vamutsiridzi ava, vateveri vavo vaibva vavaka sangano idzva zvichibva pamashoko avakataura waini yobva yashata. Vanhu vaibva vatanga kutadza kuzviverengera nekunzwisisa Bhaibheri, vaifanira kuva nemiganhu uye nzira yemararamiro yavakatarirwa nevanhu vavakasarudza kuti vavatungamirire vanokoshesa kuturikira zvakataurwa, kwete Magwaro. Kusaziva uye kutadza kwevatungamiriri ava kwakavavisa waini.
ZVAKAZARURWA 10:7 Asi namazuva enzwi romutumwa wechinomwe, kana vodo-kuridza, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa, sezvaakaparidzira varanda vake, ivo vaporofita
Zaruriro yezvakavanzika zvakanyorwa zvinokwanisa kutsvagwa zvichiwanikwa muBhaibherikubva kuna Genesisi kusvika kuna Zvakazarurwa ndiyo waini inonakisa payose sezvo kuri kutapira kwechokwadi chinorarama nekusingaperi kunozarura chokwadi chakavanzwa chaimbozivikanwa nekereke yekutanga, chikazorasika muNguva yeRima. Tine rombo rakanaka kukwanisa kusangana nekuziva chokwadi chakararama kare nekuti izvozvi zaruriro idzi dzavapo.
Asi shoko reyambiro. Tinofanira kutenda zvakatendwa mazviri nekereke yekutanga. Kana muine kutenda kwavasina kubvira vaita, munenge muchitadza!
Kereke yekupedzisira iri kufanira kudzoserwa pakutanga kwete kugadziriswa.
Eria haasi kuuya nepfungwa itsva, ari kuuya kuzotidzosera kupfungwa dzaivako pakutanga.
Kudzoserwa zvinoreva kuti kudzokera kunotangidza sezvazvaive pakutanga.
Tinofanira kutenda nekurarama sezvakaitwa nekereke yekutanga yeTestamente Itsva.
Kereke yekutanga yakatenda mune zvaunotenda here? Kana mhinduro yako iri, “Kwete”. Kutenda kwako kunenge kwakarasika.
JOHANE 2:11 Ichi chiratidzo chake chokutanga Jesu wakaita paKana yeGarirea, akaratidza kubwinya kwake; vadzidzi vake vakatenda kwaari.
Munana wake wekutanga pamuchato waive wekushandura mvura kuita waini. Kana tikagona kubata zaruriro yeShoko rakanyorwa kubva pamazwi akataurwa nemutumwa wechinomwe, zvino nesuwo tichava chikamu chemunana wekereke yekupedzisira apo kutenda kwedu kunotanga kushandurwa kuti kubve muMagwaro chete miviri yedu yozoshandurwawo kuti igone kukwira kudenga kunosangana naShe.
Vadzidzi vaitenda maari. Tinofanirawo kutenda maari. Ndiye Shoko.
Tinofanira kutenda nekutevera Shoko rakaziviswa, kwete kutevera muprofita anozivisa zvakavanzika zveShoko rakanyorwa.
JOHANE 2:12 Shure kwaizvozvo wakaburukira Kapernaume, iye namai vake navanun’una, navadzidzi vake; akagarapo mazuva mashomanene.
Kubva pamaonero evanhu, mai nevakoma vaJesu vaizova vakakosha kwaari. Vadzidzi vakataurwa pekupezisira, zvikavaita vasina kunyanya kukosha. Apa pane muono wemweya wakadzama. Vadzidzi, vakataurwa pekupedzisira kunge ndivo vasina kukosha, ndivo vaizoita basa rakarema rekutanga kereke. Maria nevakoma vaJesu, kunyange vakatanga kutaurwa kunge vakanyanya kukosha, vachaita basa duku kwazvo.
Tinodzidzei kubva pane izvi?
Zvakakosha mumaziso evanhu hazvina kukosha kubasa raMwari. Basa chairo rinoitwa nevasina kukosha. Hukama hwemhuri hauna kukosha zvachose.
Jesu akasarudza vatorwa kuti vaite basa guru racho, kwete mhuri yake.
Nepotizimu ndiro rusarura uchida vemhuri yekwako zvakanyanya.
Ichi ndicho chirwere chikuru chakazara murudzi rwevanhu. Asi Jesu haana kubvira aita izvi.
Hushe hwaNapoleon kuEurope hwakawira pasi nekuti aive aisa mhuri yake yaive nehunhu hwakaipa pamasimba ekutonga nekutapa nyika dzaive dzakamukomberedza. Iye aive akanakisa, asi ivo vaive vasina. Izvi zvakangounza marwadzo nenzira yavakawira pasi nayo.
MATEO 13:55 Ko haazi mwanakomana womuvezi here? Ko mai vake havanzi Maria here, navanunu’una vake Jakobho, naJosefa, naSimoni naJudhasi here?
Ava vaive vana vaMaria naJosefa vakaberekwa mumashure maJesu.
Munun’una waJesu mumwechete ainzi Jakobo.
Vadzidzi vaviri vakasarudzwa naJesu vaive nezita rekuti Jakobo. Ava vaviri ndivo vega vaive nanababa vavo vakataurwa mazita naMateo. Neimwe nzira Bhaibheri riri kutaura kuti kuti baba vako ndiyani hakukuiti akakosha sezvo vamwe vadzidzi vese vakasarudzwa pasina kutaurwa kuti vanababa vavo vaive vanani.
MATEO 10:2 Mazita avaapostora vanegumi navaviri ndiwawa, wokutanga Simoni wainzi
Petro naAndrea munun’una wake, Jakobho mwanakomana waZebedi naJohane munun’una wake,
3 Firipo naBatoromeo, Tomasi naMateo muteresi, Jakobho mwanakomana waArafeo naTadeo.
Saka nei vanababa vanaJakobo vaviri ava vakataurwa?
Ichi chinhu chakakosha. Vanababa vevadzidzi vaviri vainzi Jakobo vakataurwa kuti zvive pachena kuti vese vaive vasiri vanun’una vaJesu.
Saka Jesu haana kubvira asarudza munhu mumhuri yake kuti ave mudzidzi wake.
Munyika yanhasi zvine mbiri kuti munhu ane mbiri avake kereke yozotorwa nemwanakomana wake, uyo chinhu chikuru chinomugonesa kutora chinzvimbo ichi ndechekuti mwana wamufundisi. Chinangwa chikuru ndechekuita kuti mari nesimba zvirambe zviri mumba mavo. Mufundisi nemhuri yake ndivo vakabata zvinhu. Asi vanhu vese vanozviona voita sevasingazivi kuti ndicho chinangwa.
MuBhuku raGenesisi, vatumwa vatatu vakauya kuSodoma moto usati wanaya. Senturi yadarika yakaona hushumiri hutatu hwakamira musoro nemapfudzi pamusoro pevaivatevera.
Billy Graham, ainzi nevazhinji achave muvhangeri mukuru wenguva iyoyo, semutumwa kumakereke asiri ePentecositi.
Oral Roberts nehushumiri hwake hunoshamisa aive mutumwa kunguva yePentecositi.
William Branham, aive nechipo chikuru munzvimbo dzemweya, akatumwa kunozivisa zvakavanzika zveShoko zvakambotendwa mazviri nekereke yekutanga zvikazorasika muNguva dzeRima. Aive mutumwa kuMwenga waKristu wechokwadi anotora zvakataurwa naWilliam achizvidzosera muBhaibheri otsigira chokwadi nekufambisa kutenda kwavo maererano neBhaibheri. Simba rehushumiri hwake hwemweya rakazunza nyika. Dzidziso dzake dzakafuratirwa zvizhinji.
Varume vatatu ava vaishamisa. Vakarova nyika nekubata kukuru.
Sekupupura kuduku kunobva kwandiri. Ndakakura ndiri mutadzi akaoma ndisina chandaida kunzwa chekereke. Asi kuramba kwandakaita ndichitambira kure nechitendero, ndakaramba ndichingonzwa nezvemuparidzi anonzi Billy Graham. Vaive vasiri vateveri vake chete vaiita kuti ave nembiri kudai. Kuratidzira kwake kwakaparidza chinhu chikuru pasi rese. Chero mutadzi akaita kunge ini, aive kure uye asina hanya, aisagona kuramba asi kufadzwa nekubata kwehushumiri hwake hwandairamba ndichinzwa nezvaho.
Nhasi uno zvinhu zvashanduka. Mhuri yake yakatora chinzvimbo. Nguvo yakabva kuna baba kuenda kumwanakomana.
Mwanakomana waOral Robert anonzi Richard Roberts ave kutungamirira sangano iri.
Franklin Graham akatorawo kubva kuna Billy Graham.
Joseph Branham akatora kubva kuna William Branham nguva refu mumashure merufu rwababa vake achibva asimudzira baba vake kubva pakuva “izwi remutumwa wechinomwe” kuva “Izwi raMwari”. Asi simba rinoshamisa raMwari raive pana William Branham, rakapera.
Hapana pakati pevana vatatu ava ane kubata kwaive nanababa vavo, vaive vakadanwa naMwari.
Kupanana masimba mumhuri ndiko kwaive nheyo dzekusimbisa simba pahushe hweRoma pamadzimambo manomwe ekutanga ehushe hweRoma.
Ava ndivo madzishe manomwe atinoyambirwa nezvawo kuna Zvakazarurwa Chitsauko 17. Wekutanga aive Julius Ceasar, aive asina tsitsi uye ari chikara, akavaka simba guru paRoma. Hutsinye hwemhuri yake yakabatirira pamasimba makuru kwemakore anosvika zana hwakabereka nzvimbo yekuchema, kushaya hanya, huwori, kuurayana, uye hupfumi hwakawandisa apo mimvuri yakaipa yakatanga kunyuka apo rusununguko rwevanhu vaitya kwazvo zvakatanga kuwodzwa.
“Mumwe ndiye” ndizvo zvakataurwa naJohane Muzaruriri pamusoro paMambo wechitanhatu Nero akamuisa muhutiziro kuPatimosi makore ari pakati pa 64 AD na 68 AD. Simba guru raive rakapihwa kuna Nero nekuda kwehukama hwaive pakati pemhuri yake na Ceasar, raive ramushandura kumuita chikara chinotyisa akatanga kuuraiwa kwemaKristu. Kuwira pasi kwehwaro hwemamiriro ezvinhu kwaive kukuru kwazvo.
Tinodzidza chinhu chakaoma. Shoko raMwari haribvi kumunhu kuenda kumwanakomana wake.
Mambo David vaikwanisa kupa hushe hwavo hwezvenyika kumwanakomana wavo Soromoni. Asi kurutivi rwezvemweya Soromoni akadzikisirwa nehupfumi hwese hwaaive aita, matarenda 666 endarama pagore rega-rega. Apa ndipo pakatangira kutaurwa pamusoro pechiratidzo chechikara, chinoyanana nekupera munezvemweya apo vanhu vanofuratira Shoko rakanyorwa vokoshesa kuipa uye kusagutsikana kwavo parudo rwezvepfuma.
I MADZIMAMBO 10:14 Zvino ndarama yakauyiswa kuna Soromoni gore rimwe nerimwe yakasvika matarenda ana mazana matanhatu namakumi matanhatu namatanhatu pakurema kwayo;
Muchiringu muBhaibheri “score” zvinoreva kuti makumi maviri. Saka “three score” ndimakumi matanhatu.
Akabva ada vakadzi vatorwa nezvitendero zvavo zvakaipa. Pamweya uku kwaive kusiri kupupura kwakanaka.
Asi mwanakomana Soromoni akafadza vanhu vose nepfuma yaaive azviunganidzira.
I TIMOTIO 6:5 Nokukakavadzana kusingaperi kwavanhu vanomurangariro wakavodzwa, vakatorerwa zvokwadi, vachiti kunamata Mwari ndizvo zvinofumisa.
Kupfuma hachisi chiratidzo chemakomborero aMwari kazhinji. Vanhu vakapfuma kwazvo panyika havasi maKristu vakawanda vacho.
Uyu ndiwo mutsetse wevadzidzi.
4 Simoni muKanani naJudhasi Iskarioti uya wakamupandukira.
Izvi zvinotyisa. Mutsetse wevadzidzi, vakasarudzwa, unoguma naJudasi akatengesa Jesu, Shoko. Kuwira pasi kwaJudasi kwaive chii? Rudo rwake nemakaro emari. Aitenda kuEvangeri rekuzviunganidzira pfuma. Akabva kuShoko kuti aite mari.
Kufuratira Shoko kunotiisa kuchiratidzo chechikara.
Yambiro yakachenjera apo 666 inoonekwa paChitsauko ichi neVhesi irori.
Chidzidzo chakaoma. Rudo rwemari runotibvisa kuShoko.
Saka mhuri yaJesu yechokwadi ndeipi?
MATEO 12:46 Wakati achataura navanhu vazhinji, tarira mai vake navanun’una vake vakamira kunze, vachitsvaka kutaura naye.
47 Mumwe akati kwaari, havo mai venyu navanununa venyu vamire kunze vachitsvaka kutaura nemi.
48 Akapindura akati kuna iye wakamuvudza, mai vangu ndianiko navanunu’una vangu ndivananiko?
49 Ndokutambanudza ruvoko rwake kuvadzidzi vake akati, Tarirai mai vangu navanunu’una vangu!
50 Nokuti aninani unoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga ndiye munun’una wangu, nehanzvadzi namai.
Jesu akabvisa kukosha pamhuri yaakaberekwa nayo. Aizogara navo kwemakore mashoma kwazvo.
Mhuri yake yechokwadi ndivo vatendi vechokwadi vanotevera zvakanyorwa muBhaibheri kuti vagone kuita kuda kwaMwari kwakaziviswa munguva yekereke yavanenge vachirarama mairi.
Ichi chidzidzo chikuru.
Kuisa mhuri kumberi kwezvinotaurwa neMagwaro injodzi.
RUKA 14:26 Kana munhu achivuya kwandiri, asingavengi baba vake namai, nomukadzi, navana, navanu’una, nehanzvadzi, kunyange novupenyu bwake vo, haangavi mudzidzi wangu.
Munofanira kuperera pana Jesu neShoko rake. Hakuna, mhuri kana mufundisi, kana munhuwo zvake anofanira kuva pakati pako nedzidziso yeBhaibheri.
Mumashure memuchato paKana vose vakaenda kuKapernaume.
Kapernaume zvinoreva kuti “guta raNahumi”.
Nahumi akaprofita kuwira pasi kweNiniva, guta guru reAsiria.
NAHUME 1:1 "Chirevo chaMwari pamusoro peNinivhe. Bhuku yezvakaonekwa naNahumi muErikoshi.
Niniva raive nezvose sezvo raive guta guru renyika ine simba kwazvo. Jona akavashanyira vakabva vatendeuka pazuva rake. Asi zvisinei havana kugara saizvozvo. Babironi raizovatapa voparara.
Kapernaume raive richienda nenzira imwechete iyi. Jesu aiwanzogara ikoko. Akaita minana mizhiniji. Messiasi aive pakati pavo asi vanhu vakazosarudza kusatenda maari. Chiuru chemakore akazotevera Kapenaume yakazova matongo.
Kapenaume raive guta rakaitwa minana mizhinji munguva yehushumiri hwake. Jesu paakabva kuNazareta akauya kuzogara muKapernaume. Umu maive mumusha maPetro, Andirea, Jakobo, naJohane.
MATEO 4:12 Jesu wakati anzwa kuti Johane wasungwa. Akaenda Garirea.
13 Zvino wakabva Nazareta akandogara Kapenaume pagungwa. Pamiganhu yeZabhuroni neNaftarimi.
14 Kuti zviitike zvakarebwa nomuporofita Isaya achiti,
15 Nyika yeZabhuroni nenyika yeNeftarimi, panzira yegungwa mhiri kwaJoridhani. Garirea ravahedheni.
16 Vanhu vakanga vagere murima vakavona chiedza chikuru. Navakanga vagere panyika nomumumvuri worufu, chiedza chakavabudira.
17 Kubva panguva iyeyo Jesu wakatanga kuparidza achiti, tendevukai nokuti vushe bwokudenga bwaswedera pedo.
Saka tingangoti hushumiri hwake hwakatangira kuKapernaume.
Jesu haana kuenda kwaaida kuenda.
Akaenda kunzvimbo yakataurwa muBhaibheri. Hupenyu hwake hwese hwaive panheyo dzeShoko raMwari rakanyorwa.
Minana mizhiniji yakaitika pano munguva yehushumiri hwake. Regai titarise imwe yacho.
Muranda wake aive arwara. Asi kana Jesu akangotaura Shoko, muranda aizoponeswa ari kwaaive ari.
MATEO 8:14 Jesu, wakati achipinda mumba maPetro, akavona mai vomukadzi wake vavete vachinzwa fivhiri. Akabata ruvoko rwavo, fivhiri ikabva kwavari, vakasimuka vakamushandira.
Jesu akateera mitero yese yaaifanira kuteera, kwete kunge vamwe maKristu nhasi uno vanonzvenga mitero.
Jesu akaudza Petro kuti abate hove yaive nemari mumuromo mayo. Mari iyoyo yakashandiswa kuripira mutero wavo.
Kunyange hove yakaripira chegumi kuna Jesu. Dzakadya mitumbi yevakanyura mumvura munguva yeMvura yaNoa. Dzaimukwereta.
MARKO 1:21 Vakapinda Kapernaume pakarepo nomusi wesabata, akapinda musinagoge akadzidzisa.
22 Vakashamiswa nedzidziso yake nokuti wakavadzidzisa sounesimba, asingaiti savanyori.
Jesu akavadzidzisa chokwadi akadzinga mweya wakaipa kubva mumunhu.
MARKO 2:1 Akapindazve Kapernaume pashure pamamwe mazuva zvikazikamwa kuti uri mumba
Vanhu vazhinji vakamuunganira. Munhu aive akaremara akadzikiswa kwaari kubva nepamusoro pemba.
Zvino rimwe zuva vakati vachiuya Kapenaume, vadzidzi vake mumwe nemumwe akada kuratidza kuti aive akakosha kukunda vamwe. Sezvinoitika mazuva ano kuvafundisi nevakuru vemakereke. “Ndini ndiri panyanga. Ndakakosha kukunda iwe. Ndiri mupostora, ndiri bhishopu. Ndini ndiri pamusoro pavose. Ndiyemurei. Chivai ini. Ndirumbidzei.” kuzvikudza nekuzvisimudzira ndizvo zvirwere zvinopindiridza mumoyo yedu vanhu.
Pakati pavo vakapokana kuti ndiyani aive mukuru. Muhuvepo hwaJesu vakaramba vanyerere. Vachienzaniswa naye vakaona kuti vaive vasiri chiro.
Isu vanhu hatifaniri kuzvifananidza nevamwe vanhu nekuti tinobva tazvikudza todzikisira vamwe. Zvine hutano kuzvienzanisa naJesu nekuti ipapo tinobva taziva kuti tiri varanda pasina.
RUKA 17:10 Saizvozvo nemi vo, kana maita zvose zvamarairwa, muti: Tiri varanda pasina, takaita sezvataifanira kuita.
Kutukwa kusingaperi kwekuzvikudza. Ndiri nani kupinda iwe. Vadzidzi vaifunga kuti vari nani vakapesana nechinangwa chekudanwa kwavo.
Vari Kapenaume dambudziko rekuzviisa muzvikwata rakasimuka. Kereke yangu iri nani kukunda kereke yako.
MARKO 9:38 Johane akati kwaari: Mudzidzisi, tavona munhu achibudisa mweya yakaipa muzita renyu, tikamudzivisa, nokuti haana kutitevera.
Kutukwa kwekuzvikudza kunotevera ndekwekuti sangano rangu rega ndiro rakanaka. Munhu uyu anofanira kunyararidzwa nekuti haanditevere kana kuti haasi mumwe wemusangano redu. Kunokwanisa kuwanikwa kereke imwechete muguta, kereke yangu. Kana musinganditevere, makarasika.
Motto yevafundisi: munhu wese anofanira kutevera zvindinofunga ini.
RUKA 4:23 Akati kwavari: Zvirokwazvo muchataura shumo iyi kwandiri, chiremba uzviporese, zvose izvo zvatakanzwa zvakaitwa paKapenaume, uzviite vo nomuno munyika yako.
Mbiri yeminana yakaitika paKapenaume yakatenderera.
RUKA 4:24 Akati: Zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Hakunomuporofita unogamuchirwa munyika yake.
25 Ndinokuvudzai shoko iri razvokwadi: Kwakanga kunechirikadzi zhinji pakati pavaIsraeri pamazuva aEria, panguva yakazarirwa denga makore matatu nemwedzi mitanhatu, nzara huru ikavapo panyika yose;
26 asi Eria haana kutumwa kunomumwe wavo, asi wakatumwa Sarepta bedzi, munyika yeSidoni, kumukadzi waiva chirikadzi.
Eria muprofita paaida nzvimbo yekugara, Mwari akamuendesa mumba memuHedeni kwete memuJuda.
Iyi iyeuchidzo yakakosha yekuti kana maJuda asingatendi zvaanoitirwa naMwari, Mwari anotendeukira kumaHedeni.
Saka zvisinei nembiri yeminana yakaitirwa maJuda paKapenaume, Jesu akavayeuchidza kuti kana vasingatendi maari Mwari akasununguka kuenda kumaHedeni.
Jesu apa akazivisa yambiro yakajeka.
Minana yese yakaitwa paKapenaume haingamisi kusatenda kwavo uye haingatadzisi kuburukira kwemaJuda aya kugehena. Kupupura kushamisa kwemweya kwakasimudzira vanhu veKapernaume kupinda munzvimbo dzedenga asi izvi hazvina kuvaita vatendi.
RUKA 10:15 Newe Kapernaume, uchasimudzirwa kudenga here? Uchaburukira kuHadhesi,
17 Vanamakumi manomwe vakadzoka nomufaro, vachiti: Ishe, kunyange nemweya yakaipa inozviisa pasi pedu muzita renyu.
20 Asi, musafara bedzi nechinhu ichi, kuti mweya inozviisa pasi penyu; asi mufare kuti mazita enyu akanyorwa kudenga.
Kukwanisa kuonesa nekuratidzira mabasa anoshamisa hakuiti kuti munhu ave mutendi. Mazita edu anofanira kunyorwa kudenga muBhuku reGwaiana reHupenyu. Iyi imwadhi yakanyorwa vaya vanotenda kuShoko rakanyorwa rikaziviswa kuzuva ravo.
MATEO 7:21 Havazi vose vanoti kwandiri Ishe, Ishe vachapinda muvushe hwokudenga. Asi unoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga.
22 Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe, Ishe hatina kuporofita muzita renyu here? Nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu here? Nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here?
Kuita mabasa emweya anoshamisa hazvirevi kuti muri panzvimbo yakanaka naMwari.
Kefasi naBaramu vaive vanhu vakaipa, asi vese vakaita chiprofita chechokwadi.
MATEO 5:45 ..... nokuti vanobudisira vakaipa navakanaka zuva ravo, nemvura vanoinisira vakarurama navasakarurama.
Mwari anokomborera vanhu vese vanotenda chokwadi nevanotenda muzvakaipa. Saka chinhu chekuti Mwari vakukomborera hachirevi kuti uri munzira yekutenda chokwadi.
JOHANE 4:46 Zvino Jesu wakasvika zve paKana yeGarirea, paakanga ashandura mvura ikaita waini. Ipapo pakanga pano mumwe mutariri washe, mwanakomana wake wakanga achirwara paKapernaume.
Zvakare Jesu anoita munana ari kure paKana akaporesa mwanakomana wemutariri washe aive Kapenaume.
Pavaive muchikepe vakananga Kapenaume, Jesu akafamba pamusoro pemvura kunosangana navo mudutu. Uyu ndiwo umwe weminana yake mikuru kwazvo.
Pavakasvika Kapenaume, Jesu akasarudza kuvaedza. Vaive vaona minana mizhinji paKapenaume. Apa akasarudza kuti vanzwe kudzidzisa kwakaoma.
60 Zvino vazhinji vavadzidzi vake vakati vachizvinzwa, vakati: Iri shoko igukutu; ndianiko ungarinzwa?
61 Asi Jesu, zvaakanga achiziva mumoyo make kuti vadzidzi vake vanon’un’una neshoko irero akati kwavari, Iri Shoko rinokugumbusai kanhi?
JOHANE 6:66 Ipapo vadzidzi vake vazhinji vakadzokera shure vakasazofamba naye.
Preaching the truth from Scripture chases away the people who are attracted by the supernatural. Kuparidza chikwadi cheMagwaro kunodzinga vanhu vanokwezva nekubata mabasa emweya anoshamisa.
Vatendi vanokoshesa kubata kwemabasa anoshamisa vanonetseka kugara neShoko rakanyorwa vanobva vadarikira voita zvavo vega zvi sina zvazvinoreva.
MATEO 11:20 Zvino wakatanga kutuka maguta makanga maitwa mabasa ake esimba mazhinji, nokuti haana kutendevuka akati,
21 Unenhamo iwe Korazini! une nhamo iwe Betsaida!
MATEO 11:23 Iwe Karpenaume uchasimudzirwa kudenga here? Uchaburukira kuHadhesi nokuti dai iwo mabasa esimba akaitwa mukati mako, akaitwa muSodhoma ringadai richipo nanhasi.
Kapenaume yakanga yasimudzirwa pamweya kuti ione mabasa neminana yemweya unoshamisa asi yaive isina kunzwa, kudzidziswa kweMagwaro.
Vanhu vaifadzwa nemabasa emweya unoshamisa asi vaive vasina rudo rwekutevera Magwaro mune zvavaitenda.
RUKA 10:23 Ipapo akatendevukira kuvadzidzi vake, akati kwavari, vari voga; Meso, anovona zvamunovona, akaropafadzwa.
24 Nokuti ndinoti kwamuri: Vaporofita vazhinji namadzimambo vaida kuvona zvamunovona, vakasazvivona, nokunzwa zvamunonzwa, vakasazvinzwa.
Vatsvene veTestamente Yekare vaiona zvinhu zvenguva inouya muzviratidzo vangadai vaida kwazvo kuona nameso avo Messiasi achibata basa. Asi vanhu veKapernaume vaive vasina kushandurwa nesimba remabasa anoshamisa saka vakaramba dzidziso dzaJesu dzakadzama. Shoko renguva iyoyo rakadarika nepakati pavo asi vaive vakabatikana kwazvo nehupenyu hwavo kuti varione. Vaive naro rese, asi vakarirega richidarika nemumimwe yavo.
Kuramba zviri kuitwa naMwari munguva yenyu chinhu chakaipa kwazvo.
Vatsvene veTestamente Yekare vaitoshuvira kuti vanzwisise zvakavanzika zvaitaurwa naJesu. Zaruriro yezvakavanzika zveMagwaro yakaita kuti vadzidzi “vakomborerwe”.
Nhasi uno Mwari vari kuzivisa zvakavanzika zvakavanzwa zvakambozivikanwa nekereke yekutanga. Kana tikasaona kuti takaropafadzwa zvakadii kuti tione chokwadi chakadaro, Mwari haazofari matiri nekuti isuwo hatisi kufadzwa nezaruriro yake yaari kupedzisa kutizivisa. Ndangariro dzake dziri kuziviswa muBhaibheri dzinofanira kutifadza. Asi tinoita setinosarudza kusaziva uye miganhu yatinoisirwa nemakereke edu anotongwa nevafundisi anosiya zvakawanda zveShoko rakanyorwa muBhaibheri zvisina kutsanangurwa.
Izvi zvinozadzisa pfupiso duku yemimwe minana yakanyorwa uye zviitiko zvaizoitika paKapenaume munguva yehushumiri hwaJesu.
Kudzokera pakutanga kwehushumiri hwake. Jesu akabva paKana akaenda kuguta rake raakaberekerwa reKapernaume.
Kuziva kuti minana yese yakaitwa paKapenaume haizounzi vatendi vechokwadi vakawanda muShoko raMwari, Jesu akasarudza kugurira panzira kugara kwake ikoko.
Neimwe nzira Jesu aiti mabasa emweya muKapernaume haana kuita basa chairo raaive achiitirwa nekuti haana kubvisa kusatenda kwavo kunovaita kuti vasatende muShoko raMwari. Mabasa emweya akaita kubata kwakanaka muhupenyu hwevamwe vanhu asi haana kukurudzira vanhu kuti vararame neMagwaro.
Mabasa emweya aive nzira asi Shoko raaitaura ndiro raive hupenyu. Nzira haina kukosha kukunda nzvimbo yaunoenda.
Kubva apa tinodzidza kuti mabasa emweya anokwezva vanhu asi haabate huvepo hwevanhu ava kwenguva refu kuti avaite vadzidzi veBhaibheri vane shungu. Angava akakura sei kana kufadza sei mabasa emweya, zvinongounza kuteerera kwekunyepera kuBhaibheri kunongoperera pamusoro. Kuratidzira mabasa emweya kunosimudza shungu asi hakukurudziri vanhu kudzidza Bhaibheri, kuchivasiya vasina chavanoziva muBhaibheri. Ava ndivo vatendi vepasi pasi, kana vatori vatendi.
Asi kana dziri shungu chaidzo dzekudzidza Bhaibheri dzinokwezva munhu, zvisinei nezvese zvingaitike, munhu iyeye anozobatwa nekufadza kwezaruriro yezvakavanzika zvakanyorwa. Nzira yaMwari yekufunga yakanakisa mupfungwa dzemunhu iyeye zvekuti anenge akangokochekerwa paMuono Mukuru waMwari. Kuongororwa kwenhorondo yehupenyu hwevanhu kunodzorwa uye kufungidzirwa zvisinei nezvingaitike kana kukanganisika kwekuda kwemunhu kunoshamisa. Vanhu ava vanobva vadisa kwazvo kuita kwakanakisa kuri pamusoro kwazvo kwendangariro dzevanhu. Vanongoda kuziva zvizhinji vovawo chikamu chenhorondo yevanhu.
Vadzidzi vakava varedzi vevanhu. Mabasa emweya ndiwo mujenya unokwezva hove duku kuti dziuye. Zaruriro yeShoko rakanyorwa ndiwo mujenja unokwezva hove huru dzinotuhwina mumvura dzakadzika.
Hove duku ndivo vasikana vakavata vanofadzwa nekuratidzira mabasa emweya, kufadzwa nemimhanzi, uye kuparidza kwepamusoro-soro. Vanotenda kuShoko rakareruka kunzwisisa vofuratira rimwe rese rinoda kufunga kwakadzama. Vane mafuta mashoma kwazvo kuti vawane chiedza chakakwana kuti vashandise kuverenga Bhaibheri. Saka havakwanisi kuona kana kunzwisisa zvakanyorwa.
Hove huru dzinotuhwina kwakadzika, mafungu akavanda ndiwo Mwenga. Ndivo vatendi vechokwadi muMagwaro ese akanyorwa. Vanofara nekufunga kwakaoma. Kuedzwa uku kunovasimudzira sekunge waini yakanaka. Vane mafuta akakwana kuti vatungidze mwenje wakajeka kuti vaverenge Shoko rakanyorwa nekuona zvarinoreva. Kusimudzwa kwavo kunouya nekubatanidza Shoko rakanyorwa kuti hurongwa hwaMwari hukuru kuzuva ravo huziviswe kuti ivo vatungamirirwe.
Jesu zvino anoenda Jerusarema. Aive Ishe. Aifanira kusvika kuTembere. Nekuti zvaive zvakanyorwa.
JOHANE 2:13 Paseka yavaJudha yakanga yava pedo; zvino Jesu akakwira Jerusarema.
Aida kupemberera Paseka muTembere sezvo aitevera mitambo yemaJuda yese. Airarama neMurairo kuti agone kusunungura isu kubva pakutukwa kweMurairo.
JOHANE 2:14 Akawana mutembere vaitengesa mombe namakwai nenjiva, navaitsinhanha mari, vageremo.
Zvino chimwe chinhu chakabva chamutsamwisa. Vanhu vanoshandisa chitendero mumakaro avo kuti vaite mari. Vasveti veropa pamweya.
JOHANE 2:15 Akaruka tyava yorwonzi, akabudisa mutembere makwai nemombe zvose; akaparadza mari yavaitsinhanha, nokuwisa matafura avo.
Tyava chamboko chakarukwa nemakavi kana matehwe emhuka. Makavi aya akabatanidzwa akati kuti anoburitsa tyava chakanakisa. Ndicho chakashandiswa naJesu paKuuya kwake kwekutanga. Panguva yekupedzisira, vanhu vazhinji vari kuita mari nechitendero vachasara paKuuya kwake kweChipiri vachauraiwa munguva yekutambudzika kukuru. Kwavari, makavi mazhinji achaita mucherechedzo wetambo inoshandiswa nevanotongera rufu kuturika vanenge vatongerwa rufu.
JOHANE 2:16 Akati kuna vaitengesa njiva: Bvisai zvinhu izvozvo muno; musaita imba yaBaba vangu imba yokutengesera.
Akaburitsa vanhu vaitengesa muTembere akarasira mari dzavo dzavaiwana nenzira yakaipa pasi. Chakatsamwisa Kristu ndechekuti vanhu vaipfuma asi vachiti vari kushandira Mwari.
Vaive nezvinhu zvekutengesa. Semakereke anhasi. Hafu yeawa yega yega pachivhitivhiti inopera nemwadhi kana CD kana DVD rinenge richishambadzwa. Kupera kwechikamu chega chega kutsvaga mari.
Kana tikatarisa mafundisi akapfuma nhasi nedzimba dzavo dzakakura uye mari huru dziri mumabhanga mavo tinobva taona kuti ndiwo mweya mumwechete wakatsamwisa Jesu. Paachadzoka kuchange kuine vatungamiri vemakereke vazhinji vakapfuma vachakandirwa munguva yeKutambudzika kukuru.
RUKA 6:24 Asi munenhamo imi vafumi, nokuti mapiwa kunyaradzwa kwenyu.
Gwaro iri rinotaurawo pamusoro pevafundisi vedu vanhasi uye vatungamiri vemakereke. Mabhishopu. Mapostora. Makadhinari. MaPope.
Nhamo inoita seinotaura pamusoro peKutambudzika kukuru. Hazviiti sekuti pari kutaurwa pamusoro pechirairo chemuchato Kudenga.
Munzvimbo dzakurirwa nekuita kwezvemari nekutengeserana, chitendero chave chimwe chezvitengeswa munzvimbo dzekutengeserana.
JOHANE 2:17 Vadzidzi vake vakarangarira kuti kwakanyorwa, kuchinzi: Kushingairira imba yenyu kuchandipedza.
Hapana kutaurwa zvakadzidziswa naJesu muTembere, asi kutuka kwake kune vaiita hupfumi kubva pamabasa avo echitendero.
Kushingairira kwake paTembere kwaive kuri kune avo vanobatira Mwari nekuda kwekuita mari.
Bhizimisi riri pakuita zvigadzirwa zvingatengwe nevatengi vechitendero. Vanoshandura zvigadzirwa zvavo kuti zvienderane nevatengi vavo.
Makereke makuru anopa “chiedza chechitendero” sechinhu chinodiridzirwa chinotengeseka zviri nyore nekuti hachina wachinomhura.
Chitendero chavo chigadzirwa kuvazhinji nekushanduko dzezvinhu munzvimbo dzekutengeserana. Vanoda kutengesa chitendero saka havana shungu nekugadzirisa zvitendero zvinobva muBhaibheri. Kukura kwehuwandu hwezvatengwa kwakakosha kudarika hwaro hwezviri kutengwa.
Mumwe munhu anoti makereke makuru anopa chekudya chiri nyore kudzeya “chikafu chisingavaki muviri asi chinongoita kuti munhu afutunuke” (junk food) kune avo vagara vakatoremerwa mune zvemweya.
Kwavari zviitiko zvinoitika kwavari pamweya zvakakosha kudarika dzidziso. Vanoita zvekushambadza vanoti vanhu vanodzoka kana mukavapa mukana wekuderedza zvakavaremera pachinzvimbo cheruponeso. Kwavari vanongoda kunzwa zvakanaka pachinzvimbo chekuva vakanaka. Izvi zvinounza mari zhinji.
Kuita kwekuda mari kunoda kuti pawaniswe vanhu zvavanogona kurarama vasina pachinzvimbo chezvavasingagoni kurarama vasina izvi zvinoita kuti vanhu varambe vachidzoka, ungano yokura.
Pazvirongwa zvavanoshambadza kune chikamu chakaitirwa kutsvaga mari kana kutengesa zvinhu zvemweya kana zvechitendero.
Mabhizimisi anovakwa kubva pakushambadza mazita ezvigadzirwa zvakaita seApple, Google, kana Coke.
Kereke yeRoman Catholic yakaita Petro muchengeti wemasuwo edenga Maria saamai vane tsitsi vamunokwanisa kunamata kwavari. Mai Theresa naPope Francis vakavapa vanhu vaviri vanoremekedzeka kwazvo.
Parizvino makereke vanasikana vayo varikusimukira kwazvo “pazita rechigadzirwa” vachiita mbiri. Joel Osteen, Joseph Prince, Oprah Winfrey, na TD Jakes vabva vava mapato anokosha mamiriyoni emadhora akavakwa kubva pamazita iwaya.
Jesu akaziva kuti zvisinei nekuti akararama muhurombo kereke yake ichakura kuva bhizimisi rinokosha mamiriyoni emabhiriyoni emadhora. Vachiti vakabatikana nekuda kuvaka hupfumi hwekumusoro kudenga, kereke nhasi ndiyo yava umwe wevaunganidzi vepfuma yenyika ino.
Kereke yeRoman Catholic pachayo inobata chikamu chimwechete muzvikamu zvitatu zvehupfumi hweAmerica neEurope.
Jesu akadzinga vaiita zvemari muTembere. Akagumburiswa zvikuru.
Aiedza kutidzidzisei paakadzinga vanhu vechitendero vaiita mari vari muTembere yaMwari?
Tembere yaMwari iripi nhasi uno?
I VAKORINTE 3:16 Ko hamuzivi kuti muri tembere yaMwari, vuye kuti Mweya waMwari unogara mukati menyu here?
17 Kana munhu achitadzira tembere yaMwari Mwari uchamutadzira vo; nokuti tembere yaMwari itsvene, ndimi iyo.
Izvi zvinoreva zvinhu zviviri. Mwari akaisa Mweya Mutsvene wake mumoyo yevanhu vakazvarwa patsva anotarisira kuti vararame hupenyu hutsvene, kana kuti! Izvi zvinosanganisa munhu mumwe nemumwe sedombo rinorarama muTembere yaMwari.
I PETRO 2:5 Nemi vo, samabwe mapenyu, muvakwe muve imba yoMweya, muve vuPirisita vutsvene, kuti mubayire zvibayiro zvoMweya, zvinofadza Mwari nokuda kwaJesu Kristu
Zvino maKristu ese akazvarwa patsva mumakore 2 000 enhorondo yekereke vakabatana vanoita Muviri waKristu kana kuti Tembere yaMwari anorarama.
Saka Mwari aitiudza kuti achatora vatungamiri vese vakasvibisa Muviri wake wemweya kana Tembere yake, kereke yechokwadi, nekuishandira kuiita nzvimbo yekuita mari saka Jesu anovakandira kunze kweTembere yemweya. Havazova chikamu cheMwenga wake zvachose. Paanodzoka havazokwiri Kudenga. Ramangwana ravo rinotevera inguva yeKutambudzika kukuru.
MATEO 19:24 Ndinoti kwamuri zve: Kamera ingarerukirwa kupinda paburi redumho, kumufumi kupinda muvushe bwaMwari.
Kuva mupfumi hakuita kuti uve pedyo naMwari.
JOHANE 2:18 Zvino vaJudha vakapindura, vakati kwaari: Ungatiratidza chiratidzo cheiko, zvaunoita zvinhu izvozvo?
Jesu aive aparadza nzvimbo yavo yekuitira mari. Vakagumbuka kwazvo nekupindira kwake kwaakaita kuti varasikirwe nemari zvekuti vakapedzisira votsvaga nzira dzekumuuraya. Mukuita kwavo maive nekutyisa kwaionekwa nekure. Vaive nesimba kwazvo munezvechitendero uye zvematongerwo enyika nemaRoma zvekuti vaikwanisa kuronga kuti avurawe kana akaramba achipindira mukuita kwavo mari. Ndizvo zvavaikwanisa kuita kwaari.
Nguva yakatevera, makore matatu apera, mumashure mekudzingira vaiita zvemari muTemberi, vaizorangana kumuuraya.
Chiratidzo chipi chaangaratidze kuti vatye?
Akavaudza pamusoro pechiratidzo chikuru pazvose, kumuka kubva kuvakafa. Chokwadi vaikwanisa kurangana nevaRoma kuti vamuvuraye, asi aizomukazve kubva kuvakafa.
Aizourawa nekuvigwa musi weChishanu. Ogara mubwiro musi weMugovera ozomuka musi weSvondo. Saka mazuva matatu aizofambidzana nezverufu rwake. Chikamu chemusi weChishanu, zuva rese musi weMugovera, nechikamu chemusi weSvondo
JOHANE 2:19 Jesu akapindura, akati kwaari: Putsai tembere iyi, ini ndichaimutsa zve namazuva matatu.
JOHANE 2:20 Zvino vaJudha vakati: Tembere iyi yakavakwa namakore anamakumi mana namatanhatu, zvino iwe ungaimutsa namazuva matatu here?
MaJuda aive asina ruzivo rwekuti aitaura nezvei.
Tembere ndiyo yaive nzvimbo yavo yezvechitendero uye yekuitira mari nekuda kwemakaro. Muhoro wavo waive paTembere. Asi vaive vasara nemakore anenge makumi mana chete nguva yavo isati yakwana. Ipapo Tembere nemaJuda anodarika miriyoni aizoparadzwa nemaRoma. MaJuda aive asingazogoni kuvaka Tembere zvakare.
Herode akatangazve kuvaka Temberi makore akapoteredza 20 BC, achiikudza nekuiita yakanaka. Saka yakapera kuvakwa muna 26 AD, kunyangwe zvimwe zvekupedzisa zvakazosvika muna 63 AD zvichiitwa. Saka Jesu akadya paseka yake yekutanga muna 30 AD, Temberi yaive ichangoti perei makore anoda kuita mana aive apfuura. Saka chaive chichiri chivakwa chitsva chakanakisa zvekuti maJuda aive achidada nacho. Asi Herode mumwechete uyu aive auraya vana vechiJuda vaive pasi pemakore maviri paaiedza kuuraya Jesu. Herode akakundikana pakuedza kuita izvi. Asi Tembere yaaive aisa simba rake rese nezvaaive nazvo yaizoparadzwa muna AD70.
JOHANE 2:21 Asi iye wakanga achireva tembere yomuviri wake.
Jesu aive asina shungu dzekuvakazve Tembere. Kunamatira muTemberi kwaizoguma paaifa nekuti Mwari akabva abvarura chidzitiro cheTembere. Tembere yacho pachayo yaizoparadzwa yotadza kuzovakwa zve. Tembere, sechinhu chikuru muMurairo wemaJuda waive wasvika panguva yekushaiwa chiremera uchitsiviwa neEvangeri reTestamente Itsva reNyasha chinhu chikuru mariri ndiKristu akaroverwa pamuchinjikwa.
Asi chinangwa chaJesu chaive kufa nekumuka kubva kuvakafa.
Tembere yemuviri wake yaizoparadzwa nekurovererwa nevaRoma, asi Temberi yemuviri iyi yaizomuka zvakare pakumuka kwake kubva kuvakafa. Saka Jesu aizoita zvaive zvisingagoni kuitwa neTemberi yemaJuda. Kuparadzwa nemaRoma nekudzoka zvakare pakurarama.
MaJuda nevaiti vemari vemuTemberi ava vaizokumbira rufu rwake voramba kutenda murumuko rwake.
Vaizouraiwawo muna 70 AD pakauraiwa maJuda 1100 000 muJerusarema. Uku ndiko kuuraiwa kukuru kwemaJuda kwekutanga. Muripo wavakaripira kuuraya kwavakaita Messiasi.
Tembere yavo yakaparadzwa uye haina kuzovakwazve.
MaJuda emuTemberi aifunga kuti vanokwanisa kumuuraya. Vaive vasingazivi mutoro wavaizvitakudza pamisoro yavo.
Nhasi, vese ivo neTembere vakafa havachadzokazve. Asi zvakadaro Jesu mupenyu ariko nhasi.
Saka pane chiratidzo chavakasiirwa naJesu. Simba rake rekumuka kubva kurufu rwakaipa kwazvo rwekuuraiwa nemaRoma zvisingagoneke naivo kana neTembere yavo.
Dambudziko rimwechete raive rekuti chitendero chakaipa chaiitirwa kuzviunganidzira mari chavaive nacho chaizoenderera mberi nekubudirira munguva yekereke yekupedzisira. Vatungamiriri vanoita mari nechitendero ava vachakandirwa munguva yeKutambudzika kukuru.
JOHANE 2:22 Zvino wakati amutswa kuvakafa, vadzidzi vake vakatenda, kuti wakanga areva izvozvo; vakatenda Magwaro neshoko rakangararebwa naJesu.
Mumashure mekumuka kwaJesu kubva kuvakafa ndipo pakazotanga vadzidzi vaJesu kunzwisisa hurongwa hwese hweEvangeri.
Magwaro avo yaive Testamente Yekare. Mashoko akataurwa naJesu aive akanyorwa sechikamu cheTestamente Itsva. Zvese zvakataurwa nekuitwa naJesu zvaizobatanidza Testamente Yekare neTestamente Itsva pamwechete.
JOHANE 2:23 Zvino nguva yaakanga ari Jerusarema pamutambo wepaseka, vazhinji vakatenda kuzita rake, vachivona zviratidzo zvaaiita.
Minana yakakwezva vanhu vazhinji asi Jesu haana kufadzwa nazvo. Aida kuti vanhu vatende kuShoko rakanyorwa, kwete mumabasa nezviratidzo zvemweya chete. Kutenda chokwadi cheBhaibheri nekufadzwa nezaruriro dzaro kunoda hukama hwakadzama naMwari kukunda kufadzwa nemabasa emweya.
Vavengi vane manomano vanokwanisa kuratidza kunge vateveri vakatendeka.
Shamwari dzenhema dzinotsvaga kuti zvinhu zvivanakire ivo chete. Kutenda kunobva pakuona mabasa nezviratidzo zvemweya kunoshaiwa simba nekukasika sezvo kuchimutsa kubatikana kukuru. Vanhu vanokwanisa kuva vatsvaki vezviratidzo, pachinzvimbo chevatsvaki veMagwaro.
JOHANE 2:24 Asi Jesu haana kuzviisa mumavoko avo, nokuti wakanga achivaziva vanhu vose.
Tinokwanisa kunyengera vamwe vanhu asi hatikwanisi kunyengera Mwari.
Vanhu vamwechete vakamurumbidza musi weSvondo yemichindwe paaive akatasva mbongoro ndivo vanhu vamwechete vakakumbira kuti auraiwe musi weChishanu chakazotevera.
Kurumbidza kwakashanduka kuita ruvengo munguva yevhiki rimwechete.
MaJuda aya aive akajaira kwazvo kutevera vatungamiri vavo vezvitendero zvekuti vaive vasingagoni kuzvifungira.
Vaikwanisa kutuka Messiasi wavo nekuti ndizvo zvavaive vaudzwa kuti vaite nevatungamiriri vavo.
Vakamira kuzvifungira vakatanga kutevera boka. Ndizvo zviri maKristu anhasi. Asi kana mukatevera boka munodya guruva. Guruva kudya kwechikara chakashandurwa kuita nyoka nekuda kwechivi paEdeni.
GENESISI 3:14 Jehovha Mwari akati kunyoka, "Zvawaita izvozvo, watukwa kupfuura mhuka dzose dzesango; uchafamba nedu­mbu rako, uchadya guruva mazuva ose oupenyu hwako.
Havazivi Bhaibheri zvakakwana, vanotya kupokana nemukuru wekereke, uye vanotya kudzingwa mukereke. Ndiwo mamiriro aita hupenyu hwemaKristu anhasi vasingagoni kuzvitaurira zvavanofunga vachimanikidzwa kutenda kudzidziso yekereke. Ichi chiitiko chakaoma nekuti kwava nemasangano anosvika 45 ooo akasiyana siyana, vese vanoti ndivo vane chokwadi. Kereke yenyu ine mukana mumwechete pamikana 45 ooo yekuva nechokwadi. Zvinoreva kuti hapana mukana zvachose. Vasikana vese vane gumi (makereke akanaka akaponeswa) vaive vakarara mumufananidzo.
Zvisinei makereke akazotevera akasarudza kutevera tsika dzakaitwa nevanhu dzekereke yeRoman Catholic, inozvidaidza kuti mai vemakereke, pachinzvimbo chekereke yeTestamente Itsva. Vanoisa mufundisi pakutonga kereke kunyange zvisina kubvira zvaitika mukereke yekutanga umo izwi rekuti “mufudzi” rakamiririra kuti pasita rakataurwa kamwechete. Iye mufundisi anovafungira ivo vanotya kupokana naye.
JOHANE 2:25 Wakanga asingatsvaki kuti munhu mumwe apupure zvomunhu; nokuti wakanga achiziva iye zviri mumunhu.
Munhu mumwe nemumwe anozvinatsa chimiro chake kuti afadze vamwe. Asi Jesu paakamira pamberi peimba yaPirato yekutongwa vanhu vese vaivepo vakamuzvidza pakashaikwa akamupupurira. Ndiko kushaya maturo kwedu isu vanhu. Tinodonha zviri nyore kana zvinhu zvaoma.
Jesu Ishoko raMwari. Kana nyika yese ikamhura zviri muBhaibheri, takagadzirira here kutakura kurema kwekutsvinyirwa nekurwadziswa kunouya nekumira neShoko rakanyorwa.
Kunyange Simoni wekuSairini akangobatsira Jesu kutakura muchinjikwa nekuti aive amanikidzwa kuita izvozvo.
MATEO 27:32 Vakati vachibuda, vakawana munhu wekuSairini wainzi Simoni. Vakamumanikidza iye kuti atakure muchinjikwa wake.
Tinomira zvakadii kana vamwe vanhu vese vapokana nechokwadi cheBhaibheri?
Kana nyika yese yaramba Bhaibheri reKing James Vhezheni.